အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ အမဲသားတင်ပို့မှု ယာယီပိတ်ပင်သည့်မူဝါဒကြောင့် ဘရာဇီးလ်လုပ်ငန်းရှင်များ အကျိုးဖြစ်ထွန်း
အသားပို့ကုန်များကို ရက် (၃၀) ကြာ ယာယီပိတ်ပင်ရန် အာဂျင်တီးနားအစိုးရက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အာဂျင်တီးနားအစိုးရ၏ အသားပို့ကုန်များအပေါ် ယာယီပိတ်ပင်သည့် မူဝါဒသည် တရုတ်နိုင်ငံက အများဆုံးဝယ်ယူတင်သွင်းနေသည့် ကမ္ဘာ့အမဲသားဈေးကွက် တွင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်အသားများအတွက် ဈေးကွက်နေရာ ပိုမိုရရှိစေလျက်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အသားများတွင် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ Agrifatto ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး Lygia Pimentel က သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ၏ ၇.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပြည်ပသို့ အသားတင်ပို့မှုမှ ရရှိနေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အာဂျင်တီးနားအစိုးရ၏ အသားတင်ပို့မှု ပိတ်ပင်သည့် မူဝါဒကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှ အသားများကို အဓိကဝယ်ယူတင်သွင်းရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း သတင်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ အသားများအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာမည့်အခြေအနေသည် အသားထုတ်လုပ်သည့် ဘရာဇီးလ်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော်လည်း ပြည်တွင်းတွင် အသားဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်တက်လာနိုင်သည့် အတွက် ပြည်တွင်းငွေ ကြေးတန်ဖိုး ကျဆင်းမှုဒဏ်ကို ပြည်သူများ တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ကြောင်း Lygia က သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အာဂျင်တီးနားသမ္မတ၏ အသားတင်ပို့မှုယာယီပိတ်ပင်သည့် မူဝါဒသည် ရက်ပေါင်း (၃၀) ထက် ပိုမိုကြာမြင့်ပါက အသားထုတ်လုပ်သည့် အာဂျင်တီးနား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း အကြံပေးကုမ္ပဏီ၏သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အာဂျင်တီးနားသမ္မတအနေဖြင့် ပြည်တွင်းအသားဈေးနှုန်းများ ပုံမှန်ဈေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် ပြည်ပသို့အသားတင် ပို့မည့် ပမာဏအပေါ်တွင်သာ ကန့်သတ်ချက်များချမှတ် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အသားတင်ပို့မှု ယာယီပိတ်ပင်ခြင်းသည် အခြားပြဿနာများ ကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း Lygia က သတင်း ဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လတ်တလောပြဿနာမှာ ဈေးကွက်အတွင်းသို့ အသားများပိုမိုဝင်ရောက်လာရန်ဖြစ်ပြီး အသားဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်နေမှုသည် အာဂျင်တီးနား ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်လည်း ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အသားထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များအပေါ် မူတည်၍ အသားဈေးနှုန်းများ အတက်အကျ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အစိုးရ၏ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှု ထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များသည် ပြည်တွင်း အသားဈေးနှုန်းများအပေါ် ကာလတိုအတွင်းသာ ထိရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း၊ ထိန်းချုပ်ရေး မူဝါဒအား ကာလရှည်လုပ်ဆောင်ပါက လုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခိုက်မှုများရှိလာပြီး အသား ထုတ်လုပ်မှုများ တဖြေးဖြေးလျော့ကျလာကာ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ ထောက်ပြပြောပြချက်များအား သတင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ထို့အပြင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း အသားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် များအပေါ် အထူးသတိပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဈေးကွက်အတွင်း ပုံမှန်အခြေအနေထက် မြင့်မားသော ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် ကာလတစ်ခုအတွင်းသာ လုပ်ငန်းရှင်များ အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီး ရေရှည်တွင် ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်၌ ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်ရန် အလွန် အရေးကြီးကြောင်း ပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်ချက်များအား သတင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
(ရင်းမြစ်- ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးသံမှူးပေးပို့သည့်သတင်း)
Read more about အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ အမဲသားတင်ပို့မှု ယာယီပိတ်ပင်သည့်မူဝါဒကြောင့် ဘရာဇီးလ်လုပ်ငန်းရှင်များ အကျိုးဖြစ်ထွန်း
အခွန်စည်းမျဉ်းသစ်များဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်နာလန်ထူရေးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နေသည့် အီးယူ
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့သည့် အီးယူ၏ စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူရန်ကြိုးပမ်းမှုကို အထောက်အကူပြုမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွန်စနစ်တစ်ရပ် အတွက် အစီအမံများကို ဥရောပကော်မရှင်က ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ဥရောပ ကော်မရှင်သည် ၂၁ ရာစုအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွန် (Business Taxation for the 21st century) အမည်ရှိ Communication ကို ဥရောပပါလီမန်သို့ ၁၈-၅-၂၀၂၁ ရက် တွင် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းတွင် လာမည့်နှစ်များအတွင်း အီးယူအတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေ လုံလောက်စွာ ရရှိရေးနှင့် စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရေးဆိုင်ရာ ရေတို/ရေရှည် မျှော်မှန်းချက်များပါဝင်ပါသည်။
အီးယူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွန်စနစ်သစ်သည် ကမ္ဘာ့အခွန်စနစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် G20 နှင့် OECD တို့၏ ဆွေးနွေးချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ရေရှည်တည်တံ့၍ အလုပ်အကိုင်ပေါများသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားကောင်းစေသော၊ အီးယူ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်တံခါးဖွင့်ရပ်တည်ရေးမူဝါဒကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အီးယူသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွန်ဆိုင်ရာမူဘောင်အသစ် တစ်ရပ် ကို တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းမူဘောင်သစ်တွင် အီးယူဘုံဈေးကွက်အတွင်း ပို၍လုပ်သာ ကိုင်သာရှိသော စီးပွားရေးဝန်းကျင်တစ်ရပ်ဖန်တီးကာ အခွန်ဆိုင်ရာ အတားအဆီးများနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို လျှော့ချဖယ်ရှားသွားမည်ဖြစ်သည်။ Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) မူဘောင်ဖြင့် အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား အခွန်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ မျှတစွာခွဲဝေပေးမည့် ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းခွန်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ BEFIT သည် အခွန်ဆိုင်ရာ ကြိုးနီစနစ်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လိုက်နာရမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်း၊ အခွန်ရှောင်မှုအခွင့် အလမ်းများကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းတို့ဖြင့် အီးယူဘုံဈေးကွက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ဥရောပကော်မရှင်၏ အခွန်စနစ်သစ်အဆိုပြုချက်တွင် အီးယူ၌ လုပ်ငန်းလည်ပတ် နေသောကုမ္ပဏီကြီးများ၏ အခွန်နှုန်းထားများနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တိုးတက် လာစေရေး၊ အခွန်ရှောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းခွန်ကိစ္စရပ်၌ ကုမ္ပဏီများ၏ ကြွေးမြီနည်းဖြင့်ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်တင်းခြင်း (Debt Financing) နှင့် ငွေဖြစ်လွယ်မှုနည်းအရ ဘဏ္ဍာငွေဖြည့်တင်းခြင်း (Equity Financing) တို့ အကြားဘက်လိုက်မှုများကိုဖြေရှင်း၍ စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် အစီအမံများကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။
အလားတူ အဆိုပါအခွန်စနစ်သစ်အဆိုပြုချက်တွင် အခွန်ဆုံးရှုံးမှုများကုစားရေး အကြံပြုချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းအရ အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အခွန်ပြန်အမ်းငွေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ခွင့် (Loss carry-back) ကို အနည်းဆုံး ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်စာ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ခွင့်ပြုပေးခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ငွေကြေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး အထူး သဖြင့် SMEs လုပ်ငန်းများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ စီးပွားရေးသံမှူး ပေးပို့သည့်သတင်း)
Read more about အခွန်စည်းမျဉ်းသစ်များဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်နာလန်ထူရေးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နေသည့် အီးယူ
၁။ အမဲသားတင်ပို့မှုများအပေါ် စောင့်ကြည့်နိုင်မည့်မှတ်ပုံတင်စနစ်အသစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးတော့မည်ဟု အာဂျင်တီးနားအစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေများကို အာဂျင်တီးနားအစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီးနောက် အဆိုပါမှတ်ပုံတင်စနစ် ကျင့်သုံးမည့်မူဝါဒကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်နေမှုကို ရပ်တန့်ရန်အတွက် ပို့ကုန်ဆိုင်ရာတားမြစ်ကန့်သတ်ချက်များအား အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ ပို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ပြည်တွင်းအသားဈေးနှုန်းများမှာ ပုံမှန် အခြေ အနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊ အာဂျင်တီးနားအစိုးရ၏ ပို့ကုန်ကန့်သတ်မှု လုပ်ဆောင်ချက် များသည် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ အသားတင်ပို့မှုအတွက် ဈေးကွက်နေရာ ပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း လယ်ယာထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ Safras မှ ဈေးကွက်သုတေသနပညာရှင် Fernando Iglesias က သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့အမဲသားဈေးကွက်တွင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံနှင့်အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံတို့သည် အဓိကပြိုင်ဖက်များဖြစ်ကြပြီး တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်သို့လည်း အမဲသား အမြောက်အများ တင်ပို့လျှက်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှုရှိရန်အတွက် အာဂျင်တီးနားအစိုးရအနေဖြင့် မဟာ ဗျူဟာများရေးဆွဲ၍ ထိန်းချုပ်မှုများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပြီး အာဂျင်တီးနားအစိုးရ၏ ပို့ကုန်ကန့်သတ် ချက်များ ချမှတ်ကျင့်သုံးမှုသည် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ အမဲသားပို့ကုန်များအတွက် ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်း များပိုမိုရရှိစေလျှက်ရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံမှဝယ်ယူတင်သွင်းလျှက်ရှိသည့် အမဲသားဈေးကွက် တွင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံအမဲသားပို့ကုန်များ ဈေးကွက်ပိုမိုရရှိကာ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာရှနိုင်ငံ များသို့ တင်သွင်းနေသည့် အသားဈေးကွက်တွင် အာဖရိကကြက်တုပ်ကွေးရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှုများ လည်းဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ကြက်တုပ်ကွေးရောဂါရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ကာလများအတွင်း အာဂျင် တီးနားနိုင်ငံမှ အသားများကို တရုတ်နိုင်ငံက အများအပြားဝယ်ယူတင်သွင်းခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အသားလိုအပ်ချက်မှာ လစဉ်မြင့်တက်လျှက်ရှိနေသဖြင့် အသားထုတ်လုပ်တင်ပို့နေသည့် မည်သည့်နိုင်ငံ မဆို တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ ဂျုံဈေးနှုန်းများကြောင့် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ ဂျုံထုတ်လုပ်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်ခြင်း
၂။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ ဂျုံဈေးကွက်တွင် အရောင်းအဝယ်များအေးစက်လျှက်ရှိနေသဖြင့် ပြည်တွင်းရှိ ဂျုံမှုန့် အသုံးပြုသည့်စက်ရုံများမှ ဝယ်ယူအသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာစေရန် ဆွဲဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင် လျှက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်တွင်းမှထွက်ရှိသည့်ဂျုံမှုန့်များသည် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်များနည်းပါးသော်လည်း အနည်းငယ်သာ ထုတ်လုပ်သဖြင့် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ဂျုံမှုန့်များအပေါ်တွင်သာ အဓိကမှီခိုနေ ရကြောင်း၊ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံနိုင်ငံသို့ ဂျုံမှုန့်အဓိကတင်သွင်းလျှက်ရှိသည့်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်း ဂျုံမှုန့်ဈေးနှုန်းများ သိသာစွာမြင့်တက်လျှက်ရှိရာ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရှိ ဂျုံမှုန့်ဈေးကွက်အပေါ်တွင်လည်း ရိုက်ခတ်မှုများရှိနေကြောင်း၊ ပြည်တွင်းဂျုံမှုန့် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်နေမှုကြောင့် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ ဂျုံမှုန့်တင်ပို့မှုအား ထိခိုက်နိုင်မှုအပေါ်တွင်လည်း ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံဝယ်လက်များက စိုးရိမ်ပူပန်လျှက် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းတင်ပို့မှု ၃၅ % ပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ကြောင့် USDA ကပြောကြားခြင်း
၃။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်ကာလတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပြောင်းစေ့တန်ချိန် (၅၂၁၃၀၀) တင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြောင်းစေ့အဓိကဝယ်လက်များဖြစ်သည့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသို့ တန်ချိန်(၂၉၆၉၀၀)၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ တန်ချိန်(၁၁၇၁၀၀)၊ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့တန်ချိန်(၈၉၂၀၀)၊ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသို့တန်ချိန် (၇၁၁၀၀)နှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံသို့ တန်ချိန် (၅၈၂၀၀)တို့အား အသီးသီးတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သီးနှံရာသီအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပြောင်းစေ့တန်ချိန် (၅၅၃၄၀၀)အားလည်း ရောင်းချထားပြီးဖြစ်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အဓိက ဝယ်လက်နိုင်ငံသို့ တန်ချိန် (၃၆၁၄၀၀)၊ ဂွါတီမာလာနိုင်ငံသို့ တန်ချိန်(၁၃၆၇၀၀)၊ ပနားမားနိုင်ငံသို့ တန်ချိန် (၂၀၄၀၀)နှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသို့ တန်ချိန်(၂၀၃၀၀)အား ရောင်းချထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သင်္ဘောတင် ပြီးစီးမှု အနေ ဖြင့် ပြောင်းစေ့တန်ချိန် (၁.၉၁၅)သန်းရှိကြောင်း၊ ပြောင်းစေ့တင်ပို့မှုအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တန်ချိန် (၅၆၁၆၀၀)၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တန်ချိန်(၃၉၉၅၀၀)၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသို့ တန်ချိန်(၂၈၇၄၀၀)၊ တောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ တန်ချိန် (၁၈၃၈၀၀)နှင့် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသို့ တန်ချိန်(၉၄၆၀၀)တို့အား အသီးသီး တင်ပို့ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(Brasilia စီးပွားရေးသံမှူး ပေးပို့သည့်သတင်း)
ကပ်ရောဂါကာလတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများကို ပိုမို စားသုံး လာ ကြခြင်း
၄။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ ဈေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီ GfK စစ်တမ်းအရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ် ရောဂါ ဖြစ်ပွားသည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံ များကို ပိုမိုစားသုံးလာကြသော်လည်း စားသုံးမှုသည် အာဟာရပညာရှင်များက လိုလားသည်အဆင့်သို့ မရောက်ရှိသေးကြောင်း၊၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်သမား အများစု အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ နေအိမ်မှတစ်ဆင့် အလုပ်တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရခြင်းတို့ကြောင့် လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှ စားသောက်ကုန်များဝယ်ယူမှုသည် (၁၂%)တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း၊ အလား တူ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝယ်ယူမှုသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (၁၁%)၊သစ်သီးဝလံများဝယ်ယူမှု(၄%) တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ အိမ်ထောင်စုက အများဆုံးဝယ်ယူကြသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် မှာခရမ်းချဉ်သီး၊မုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်နီတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ သစ်သီးဝလံများတွင် ငှက်ပျောသီး၊ ပန်းသီးနှင့် လိမ္မော်သီးများကို အများဆုံးဝယ်ယူကြသော်လည်း ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများစားသုံးမှုသည် အလွန်နည်းပါးနေသေးကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ဘယ်လ် ဂျီယံနိုင်ငံ၊ ဖလန်းဒါးဒေသအစိုးရ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ရေထွက်ပစ္စည်းဈေးကွက်ဗဟိုဌာန (VLAM) က ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ပြည်သူများအား ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလံများ ပိုမိုစားသုံးရေး အားပေး လှုံ့ဆော်သည့်အစီအစဉ်သစ်တစ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ ကုလသမဂ္ဂ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စားနပ် ရိက္ခာအဖွဲ့(FAO)က ၂၀၂၁ ခုနှစ်အား နိုင်ငံတကာဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလံနှစ်အဖြစ် ကြေငြာ ခဲ့မှုအရ အပင်ထွက်စားသောက်ကုန်များ စားသုံးမှုမြှင့်တင်ရေး အားပေးခြင်းကို ယင်းအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းသာမက ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပြင်သစ်ဘာသာနှင့် ဒတ်ချ်ဘာသာစကားတို့ဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည့် ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ၌ ကြော်ငြာခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အီးယူပြင်ပနိုင်ငံများမှခရီးသွားများ အီးယူနယ်မြေအတွင်း ဝင်ရောက်မှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေ လျှော့ပေးရန် ဥရောပကော်မရှင်ကအဆိုပြုခဲ့ခြင်း
၅။ အီးယူနယ်မြေအတွင်း၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရန် အီးယူပြင်ပနိုင်ငံသားများအတွက် ချမှတ်ထားသည့် မလိုအပ်ဘဲခရီးသွားခြင်းများ(non- essential travel) ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားမှုများကို ဖြေလျှော့သွားရေး အဆိုပြုချက်တစ်ရပ်ကို ဥရောပကော်မရှင်က အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထံသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလဆန်းတွင် တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပြုချက်များတွင် ဥရောပ ဆေးဝါးအေဂျင်စီ (European Medicines Agency-EMA)မှခွင့်ပြုထားသည့်ကာကွယ်ဆေး(သို့)ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးကိုထိုးနှံပြီးကြောင်း အထောက်အထားပြနိုင်သည့် အီးယူပြင်ပနိုင်ငံသားများကို အီးယူနယ်မြေ အတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသွားရန်၊ အီးယူနယ်မြေသို့ non essential travel ဝင်ရောက်ခွင့်ပြု ထားသည့်နိုင်ငံစာရင်းကိုရောဂါကူးစက်မှုအပေါ်မူတည်၍တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုသွားရန်နှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲ တွေ့ရှိလာပါက အရေးပေါ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (Emergency Brake)ထားရှိသွားရန်တို့ပါဝင်ကြောင်း၊ယင်း အဆိုပြုချက်အရ အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့မဝင်ရောက်မီ အနည်းဆုံး(၁၄)ရက်ကြိုတင်၍ အီးယူ က တရားဝင်ခွင့်ပြုသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ထိုးနှံပြီးသူများအား အီးယူအတွင်းသို့ ခရီးသွားလာခွင့်ပြုသွားရန်ဖော်ပြထားကြောင်း၊ အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် Negative PCR Test နှင့် Quarantine လိုအပ်ချက်ကို ဖြေလျှော့ပေးမည်ဆိုပါက အီးယူပြင်ပမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသည့် ခရီး သည်များကိုလည်း အလားတူဖြေလျှော့ပေးမည်ဟုဆိုကြောင်း၊အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား တပြေးညီ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဥရောပကော်မရှင်မှ အဆိုပြုထားသည့် European Digital Green Certificate ကို ဇွန်လကုန်တွင် အတည်ပြုနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ ယင်းလက်မှတ်ကို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးမီ အီးယူပြင်ပနိုင်ငံများမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်များ တင်ပြလာပါက အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် မိမိနိုင်ငံ၏ဥပဒေအတိုင်းစိစစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် အီးယူနယ်မြေအတွင်းသို့ non- essential travel အဖြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို နိုင်ငံ(၇)နိုင်ငံအား ခွင့်ပြုထား ကြောင်း၊အဆိုပါနိုင်ငံများမှာဩစတြေးလျ၊နယူးဇီလန်၊ရဝမ်ဒါ၊ စင်ကာပူ၊တောင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ (အပြန်အလှန်ခွင့်ပြုရန်ညှိနှိုင်းဆဲ)တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ non- essential travel ခွင့်ပြုသည့် နိုင်ငံများစာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အီးယူက ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအစီအစဉ်များ၏ အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများရှိလာသဖြင့် non- essential travel ခွင့်ပြုသည့် နိုင်ငံများစာရင်းအတွက် စံနှုန်းများကိုပြင်ဆင်ရန် ဥရောပကော်မရှင်က အဆိုပြုထား ကြောင်း၊ ခွင့်ပြုမည့်နိုင်ငံကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ရာတွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ရောဂါကူးစက်သူအရေအတွက် သတ်မှတ်ချက်အား(၂၅)ဉီးမှ(၁၀၀)ဉီးသို့ တိုးမြှင့်၍ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
သို့ရာတွင် အီးယူပြင်ပနိုင်ငံများ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့် အရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်လာပါက ၎င်းနိုင်ငံနှင့်အီးယူအကြားအပြန်အလှန်ခရီးသွားလာမှုများကိုယာယီဆိုင်းငံ့နိုင်သည့်အရေးပေါ်ထိန်းချုပ်မှု စနစ်(Emergency Brake Mechanism )ကို ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဖြစ်မနေအကြောင်းကိစ္စဖြင့် ခရီး သွားလာမှုများ(Essential travel)အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာမူပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့အနေ ဖြင့် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးခြင်းမရှိစေကာမူ အီးယူနယ်မြေသို့ ခရီးသွားလာနိုင်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်၏ အဆိုပြုချက်ကို အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊မေလကုန်တွင် အတည်ပြုနိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဖြင့် လယ်သမားများနှင့် ဝိုင်စပျစ်စိုက်ပျိုးသူများ အား ကူညီပေးလျှက်ရှိခြင်း
၆။ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ၌ လယ်သမားများနှင့် ဝိုင်စပျစ်စိုက်သူများအတွက် Agrimeteo အမည်ရှိ စနစ် ဖြင့် မိုးလေဝသ သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း၊ မိုးလေဝသ ဆိုင်ရာ Station ပေါင်း(၃၂)ခုမှ မိုးလေဝသအခြေအနေများကို (၁၀)မိနစ်ခြားတစ်ကြိမ် တိုင်းတာပြီး နောက် မိုဘိုင်းကွန်ယက်မှုတစ်ဆင့် သတင်းအချက်အလက်များကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ဝန် ဆောင်မှုဌာန(Agricultural Technical Services Administration- ASTA)၏ ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မိုးလေဝသ သတင်းအချက်အလက်များကို Website ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားပြီး မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို လယ်သမားများနှင့် ဝိုင်စပျစ် စိုက် ပျိုးသူများက ၎င်းတို့၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကအသုံးပြုကြကြောင်း၊ အပူချိန်၊ မိုးရွာ သွန်းမှု၊လေတိုက်ခတ်မှု၊ နေရောင်ခြည်ရရှိမှု စသည့်သတင်းအချက်အလက်များအပြင် အပင်ပိုးမွှားနှင့် ရောဂါများအတွက် ခန့်မှန်းချက်များကိုပါရရှိနိုင်သည်ဟုဆိုကြောင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် သစ်သီးဝလံ စိုက်ပျိုး သူများသည် ၎င်းတို့၏ ပန်းသီး၊သစ်တော်သီးပင်များ၌ scab infections ကျရောက်နိုင်ခြေအဆင့်နှင့် စပ် လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များ ရရှိခြင်း ဖြင့် လယ်သမားများသည် အပင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ အချိန်ကိုက် မှန်ကန်စွာအသုံးပြု၍ ကာကွယ် နိုင်မည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေနိုင်ကြောင်း၊ အပင်ပိုးမွှားနှင့်ရောဂါများကို ခန့်မှန်းရာတွင် လူဇင်ဘတ် နိုင်ငံသည် ရှေ့ဆောင်နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ASTA ၏ မိုးလေဝသဌာန အကြီးအကဲဖြစ်သူ Dr. Andrew Ferrrone က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ပညာရှင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ forecast models များနှင့် မြေပြင် တွင် အမှန်ဖြစ်ပျက်နေမှုများကို နှိုင်းယှဉ်၍ အပင်ပိုးမွှားများ ရှိ/မရှိနှင့် ၎င်းတို့၏တွက်ချက်မှုများ မှန်ကန်ခြင်းရှိ/မရှိကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ပညာရှင်များ၏ အနာဂတ်အစီအစဉ်များမှာ ၎င်းတို့၏ forecast models များနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် မိုးလေဝသ အခြေအနေများကို ချိတ်ဆက်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိ လယ်သမားများနှင့် ဝိုင် စပျစ် စိုက်ပျိုးသူများသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး အခြား တစ်ဖက်တွင်လည်း အပူချိန်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှု၊ အပင်ပိုးမွှားရောဂါတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့် အခက်အခဲများ ကို ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ အပူချိန် ပိုမိုမြင့်မားလာမှုကြောင့် အပင်ပိုးမွှားရောဂါအသစ်များ ကျရောက်မှု ရှိပြီး climate change ကြောင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ၌ မိုးခေါင်မှုများကို ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ဆိုကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် Agrimeteo အနေဖြင့် သီတင်းပတ်နှင့်လအလိုက်ခန့်မှန်းချက်များထက်ကျော်လွန်၍ longer– term forecast များကို ဆောင်ရွက်လိုကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆုံးရှုံးမှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံများ ထဲမှ တစ်နိုင်ငံအဖြစ်ပါဝင်နေခြင်း
၇။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည် အသေးစား၊အငယ်စားနှင့်၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆုံး ရှုံးမှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံများတွင် တစ်နိုင်ငံအဖြစ်ပါဝင်နေပြီး ပထမနှစ်အတွင်း အဆိုပါလုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်း(၇)ခုတွင် (၅)ခုဆုံးရှုံးလျှက်ရှိကြောင်း၊ Cova အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ ကျွမ်းကျင်သူ ညွှန်ကြားရေးမှူးက SMMEs ကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ၏အလုပ်လက်မဲ့နှင့် မညီမျှမှု၊စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေး နိုင်ရန် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်လျှက်ရှိသော်လည်း SMMEs များအနေဖြင့် ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုနှုန်းသည် အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ ဖြစ် ပေါ်မှုနှုန်းထက်မြင့်မားနေရာ အဓိကအားဖြင့် ငွေကြေးရရှိမှုအခွင့်အလမ်း မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး SMMEs အားလုံး၏ ၆% သာ အစိုးရ၏အထောက်အပံ့ပေးမှုကိုရရှိခဲ့ကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဌာနကြီးမှူးက အစိုးရအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်ရေး ဖိအားဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူများ စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပံ့ပိုးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီ အစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းအပြင် လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရေရှည် စဉ် ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်လည်း အလုပ်အကိုင်များစွာကို ဖန်တီးပေးနိုင် ပြီး နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး များစွာတိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံစာရင်းအင်းဌာန၏ဖော်ပြချက်အရ ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရသည့်နှုန်းသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် များစွာရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊မတ်လအတွင်း ကုမ္ပဏီပေါင်း (၂၁၆)ခုပိတ်သိမ်းရပြီး ဖေဖော်ဝါရီလတွင် (၁၇၈)ခုအထိ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရသဖြင့် ၂၁% မြင့်မားခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်း ရသည့်နှုန်းသည် စုစုပေါင်း(၁၈.၉%)အထိရှိခဲ့ကြောင်း၊ အများဆုံးထိခိုက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများမှာ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ အိမ်ရာရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သွယ်မှု၊ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုပ်ငန်း၊ အိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ပရီတိုးရီးယားမြို့ စီးပွားရေးသံမှူးပေးပို့သည့်သတင်း)
ခရီးသွားစီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်က အကြံဉာဏ်များပေးမည့်သတင်း
၈။ ဩစတြေးလျ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ခရီးသွားစီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေး နှင့်ရေရှည်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်အဖွဲ့က ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်၍ အစိုးရထံသို့ အကြံ ဉာဏ်များပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါဆွေးနွေးမှု၌ ခရီးသွားစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များပေးမည် ဖြစ်ရာ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် အပန်းဖြေ ခရီးသွားများ၊ စီးပွားရေးအစီအစဉ်နှင့်အခြားအဓိကအစီအစဉ်များ၊ ကာလတို နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် အခြားကဏ္ဍများဖြစ်သော ဟိုတယ်လုပ်ငန်း နှင့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာခရီးသွားစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးအကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ယခင် ဖက် ဒရယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဖြစ်သူအားခရီးသွားစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်(၆)လတာ ကာလအတွက် ခန့်အပ်ထားကြောင်း၊ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးက ဩစတြေးလျ သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဆိုက်ရောက်မှုတွင်ကမ္ဘာ့ဉီးဆောင်သူအဖြစ်ရပ်တည်လျှက်ရှိပြီး ဆန်းကျယ်လှပသောခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများ၊အရည်အသွေးမြင့် ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများပေးနိုင်သော နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရသည် Covid-19 ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Jobkeeper အစီအစဉ်မှတဆင့် Covid-19 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်ပုံငွေ ဩစတြေးလျဒေါ်လာ (၁)ဘီလီယံနှင့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်(၈၀၀၀၀၀) ကို ထက်ဝက်ဈေးနှုန်းထိ လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အတွက် အကူအညီများပေးခဲ့ကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဉီးဆောင်သည့် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်အဖွဲ့တွင် ခရီးသွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ(၄)ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်(၅)ဉီး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး Covid-19 အကျပ်အတည်းမှ ပေါ်ထွက်လာကာ ရေရှည်အောင်မြင်မှုရရှိစေမည့် နိုင်ငံ၏အရေးပါသောကဏ္ဍအတွက် ၎င်း အဖွဲ့ကအကူအညီပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ခရီးသွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ နောင်အနာဂတ်တွင် ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်ကာ စဉ်ဆက်မပြတ် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်းရှိသော ကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေဖြင့် ရပ်တည် နိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ကို တွေ့မြင် ရလျှက်ရှိသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်း၊ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာတွင် လာမည့်(၁၀)နှစ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ဆန်းသစ်တီထွင် ရန်၊ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင် ဆောင် ရွက်ပေးရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စိစစ်လေ့လာချက်များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်ဖော်ထုတ်ချမှတ်ထားသည့် Tourism 2030 ကို Covid-19 ကြောင့် ခေတ္တရပ်ဆိုင်း ထားမည်ဖြစ်ပြီး ယခု “Reimagining the visitor Economy” ဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ရေရှည်ကြီးထွားမည့် မူဘောင်တစ်ရပ်ကို ဖော်ထုတ်ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၂၀၂၁-၂၀၂၂ စိုက်ပျိုးရေးနှစ်၌ ကောက်ပဲသီးနှံ တန်ချိန် ၃၀၇.၃၁ သန်းအထိ တိုးတက်ထွက်ရှိရန် အိန္ဒိယ အစိုးရက အစီအမံများချမှတ်ခြင်း
၉။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားများဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် ညီလာခံ (National Conference on Agriculture for Kharif Campaign-2021) ကို ၃၀-၄-၂၀၂၁ နေ့၌ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီး နာရင်ဒရာဆင်းတိုမာ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် များက လယ်ယာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရေးအစီအမံများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း၊ အဆိုပါ ညီလာခံတွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ကောက်ပဲသီးနှံထွက်ရှိမှုကို တန်ချိန် (၃၀၁.၉၂)သန်းရရှိရန် ရည် မှန်းချက်ထားရှိဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဒုတိယအကြိမ်ခန့်မှန်းချက်အရ တန်ချိန် (၃၀၃.၃၄) သန်းအထိ ရရှိနိုင် ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ယခင်နှစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုထက် ၁.၉၆% တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ပဲမျိုးစုံ၌တန်ချိန် (၂၄.၄၂)သန်းနှင့် ဆီထွက်သီးနှံတွင် တန်ချိန် (၃၇.၃) သန်းအထိ ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ လာမည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးနှစ်တွင် ကောက်ပဲသီးနှံ တန်ချိန်ပေါင်း (၃၀၇.၃၁) သန်းထွက်ရှိရန် လျာထားကြောင်း၊ အိန္ဒိယ၏ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားဖြင့် ရှင်သန်ရပ်တည်မှု ရည်မှန်းချက်ကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ရာ၌ ပြည်ပမှ တင်သွင်းနေရမှုအပေါ် အမှီပြုနေရသည့် ပဲ မျိုးစုံနှင့် ဆီထွက်သီးနှံတို့ကို အထွက်တန်ချိန်ပမာဏ မြင့်မား စွာရရှိရန် ဦးတည်ချက်ချမှတ်ထားကြောင်း၊ ၎င်းသီးနှံအုပ်စု ၂ ခုအား ပြည်တွင်း၌ ပြတ်လပ်မှုမရှိစေရေး အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရများအနေဖြင့် စစ်ဆင်ရေးသဖွယ်သဘောထား၍ လုပ်ဆောင်ကြရန်ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်ရရှိနိုင်သည့် အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များအား တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်သော နယ်မြေဒေသများကို ပြည်နယ်များ၌ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်းနှင့် ဗဟိုအစိုးရမှ လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၁၀။ အထူးစီမံကိန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု၏ ရလာဒ်အဖြစ် Zaid season ခေါ် နွေ သီးနှံရာသီ၌ စိုက်ပျိုးမှုဧရိယာသည် ဟက်တာ(၆၃.၄၄)သိန်းရှိရာမှ ဟက်တာ(၇၅.၇၅) သိန်းသို့ တိုးတက် လာမှုနှင့်အတူ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကောက်ပဲသီးနှံ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ တိုးတက်လာကြောင်း၊ ယခုနှစ် မုတ်သုံရာသီမှာ ပုံမှန်အခြေအနေ (ကာလရှည် ပျမ်းမျှတွက်ချက်မှု၏ ၉၈% ခန့်) အတိုင်း ကောင်းမွန် ဖွယ်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း၊ ယခင်နှစ် ရိတ်သိမ်းချိန်ကာလ၌ အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသော ပဲပုတ်နှင့် ပြောင်းသီးနှံတို့မှအပ ကျန်သီးနှံများအတွက် မျိုးစေ့လုံလောက်မှုရှိကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားများဖူလုံရေးဆိုင်ရာ အတွင်းဝန်က ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနများ အနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများထံသို့ မျိုးစေ့နှင့်မြေဩဇာများကို အချိန်မီပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် သွင်းအားစု လိုအပ်ချက်အား ခန့်မှန်းတွက်ချက်လျက် ဗဟိုအစိုးရထံတင်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနသည် မိုးသီးနှံများအတွက် မျိုးစေ့နှင့်ဆက်စပ်သွင်းအားစုထောက်ပံ့မှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သော အိန္ဒိယနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့၏ ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ခြင်း
၁၁။ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ ပေါ်တိုမြို့၌ ၈-၅-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကျင်းပရန်ရှိသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂတို့မှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ ညီလာခံဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ အကြို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ကို ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ၆-၅-၂၀၂၁ နေ့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ (၈) နှစ်ကြာခန့် ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည့် ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို ပြန်လည်စတင်သွားရန်ရှိကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အဆင့်မြင့် အရာရှိတစ်ဦးက သတင်းထောက်များသို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့် အိန္ဒိယ၏ ကိုယ် ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေး သမားရိုးကျ ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်မှုများအား ဖြေလျော့ပေးမှုနှင့်အတူ အပြန် အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီး ဘက်စုံလွှမ်းခြုံမှုရှိသည့် သဘောတူညီချက်ပေါ်ထွက်လာရန် မျှော်လင့်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍသည် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား စီးပွားရေးရာနှင့် မဟာဗျူဟာကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အလားအလာကောင်းမွန်သည့် နယ်ပယ်ဧရိယာများ၌ တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါအရာရှိကပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့အကြား ကုန် သွယ်ရေးဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အကောက်ခွန်နှုန်းထားများ လျှော့ချ ရေးနှင့် အိန္ဒိယအလုပ်သမားများအား ဥရောပသို့ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးမှု၌ လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ရပ်ဆိုင်းနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဥရောပကောင်စီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဖိတ်ကြားလာမှုအရ ၈-၅-၂၀၂၁ စနေနေ့တွင် ကျင်းပမည့် အဆိုပါထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲသို့ ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ (၂၇) ခုမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နာရင်ဒရာမိုဒီသည် ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ညီလာခံအစည်းအဝေး၌ လက်ရှိ ကြုံ တွေ့နေရသည့် Covid-19 ကပ်ရောဂါအား တားဆီးထိန်းချုပ်မှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်ကဏ္ဍများ၌ မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှု၊ အင်ဒို-ပစိဖိတ် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ လူသားအခွင့်အရေးကာကွယ်မှုနှင့် စည်းမျဉ်းအခြေပြု ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးရန်အစီအစဉ်များပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအနေဖြင့် ပြည်ပရှိအပ်နှံငွေများအား ပြန်လည်ထုတ်ယူထားကြရန် အိန္ဒိယအစိုးရ က ညွှန်ကြားထားခြင်း
၁၂။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ The Hague မြို့ရှိ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးတရားရုံး (Permanent Court of Arbitration - PCA) က နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်မှုရှိသည့် အခွန်ပေးဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Cairn Energy စွမ်းအင် ကုမ္ပဏီသို့ တရားစရိတ်နှင့် နစ်နာကြေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံ (ရူပီးငွေ ကုဋေ ၈၀၀၀ ခန့်) ‌ပေးလျော်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာတွင် PCA တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် အိန္ဒိယအစိုးရဘက်မှ နှောင့်နှေးမှုရှိသည့်အပေါ် Cairn ကုမ္ပဏီသည် ဖေဖော် ဝါရီလ(၁၂)ရက်နေ့၌ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ တရားရုံးတွင် ဒီကရီအား အတည်ပြုပေးရန် မှတ်ပုံတင် လျှောက် ထားခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်၊ စင်ကာပူနှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံများရှိ တရားရုံးများ၌လည်း အလားတူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းအပြင် ဘဏ်ငွေစာရင်းများအပါအဝင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပြည်ပရှိ ပိုင် ဆိုင်မှုများကိုလည်း လေ့လာဆန်းစစ်လျက် အခြားနိုင်ငံအချို့တွင်လည်း ဇာရီမှု မှတ်ပုံတင် လျှောက် ထားရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော်လည်း ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအနေဖြင့် ပြည်ပရှိဘဏ်များ၌ Nostro Accounts များဖွင့်လှစ်လျက် ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးချေရှင်းလင်းမှုများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အပ်နှံထားသောငွေများအားပြန်လည်ထုတ်ယူထားကြရန် အိန္ဒိယအစိုးရက မကြာသေးမီ ရက်များအတွင်းက ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၃။ ရိုက်တာသတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ထိုကဲ့သို့ ပြည်ပ၌ အပ်နှံထားသည့်ငွေကြေးများအား ပြန် လည်ထုတ်ယူထားရှိရန်အတွက် အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟု အမည်ဖော်ပြလိုခြင်းမရှိသော အရာရှိတစ်ဦးကပြောကြားကြောင်း၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် (၁၂) ခု၌ ပါဝင်သည့် ဘဏ်တစ်ခုမှ အရာရှိတစ်ဦးကလည်း ထိုသို့ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ပြီး အချို့ သောတရားရုံးများသည် အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ပြည်ပရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခြင်း (သို့) ဆိုင်းငံ့ ထိန်း သိမ်းထားခြင်း လုပ်ဆောင်ဖွယ်ရှိလာမည့်အရေးကို အစိုးရက စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လျက်ရှိသည်ဟု ပြောဆို ကြောင်း၊ Cairn Energy ကုမ္ပဏီကမူ ထိုသို့ဇာရီမှုများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော်လည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် အိန္ဒိယအစိုးရနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်မှုများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ၆-၅-၂၀၂၁ နေ့၌ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ယခုကဲ့သို့ နှစ်ဘက်အငြင်းပွားမှုကိစ္စရပ်သည် ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုနှစ် တွင် Cairn India Holdings ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား Cairn India ကုမ္ပဏီလက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ပေါင်းစည်းမှုအပေါ် အိန္ဒိယအစိုးရက နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်မှုရှိသည့် အရင်းအနှီး လွှဲပြောင်းမှုမှ အခွန်‌ငွေ ရူပီး (၂၄၅၀၀) ကုဋေ တောင်းခံရာမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Cairn Energy ကုမ္ပဏီသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်၌ အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့သော်လည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သော Vedanta ကုမ္ပဏီသို့ Cairn Energy ကုမ္ပဏီက ၎င်း၏ Cairn India ပိုင်ဆိုင်မှုများအား လွှဲပြောင်းရောင်းချရာတွင် ပေးဆောင်ရန် အခွန်ကြွေးကျန် ရှိ သည်ဟူသောအချက်ဖြင့် အိန္ဒိယအခွန်အာဏာပိုင်များက ၁၀% ထက်ပိုမိုသော ပမာဏကို ရောင်းချရန် ခွင့်မပြုပဲ တားမြစ်ခဲ့သည့့်အပြင် အိန္ဒိယအစိုးရသည် Cairn India ကုမ္ပဏီမှ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ Cairn Energy ကုမ္ပဏီသို့ လွှဲပြောင်းမည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် အထွက်နှုန်းမြင့်မျိုးစေ့များကို အစိုးရ က အခမဲ့ထောက်ပံ့မည်
၁၄။ ပြည်တွင်း၌ ပဲမျိုးစုံအား လုံလောက်စွာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးရာသီ အထူးမဟာဗျူဟာကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ် ကြောင်း အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးနှင့်တောင်လယ်သမားများဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနက ၆-၅-၂၀၂၁ နေ့၌ သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ လုပ် ဆောင်ပြီးနောက် ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် မတ်ပဲတို့၏ စိုက်ဧကနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးမြင့်ရေး အသေးစိတ် အစီအမံများကို ချမှတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းမဟာဗျူဟာအရ ပြည်နယ်များနှင့် ဗဟိုမျိုးစေ့ဌာနများရှိ အထွက်နှုန်းမြင့်မားသောသီးနှံမျိုးစေ့များကိုအခမဲ့ဖြန့်ဖြူးလျက် သီးညှပ်နှင့်သီးသန့် စိုက်ပျိုးမှုဧရိယာကို တိုးချဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးရာသီ၌ တန်ဖိုးအားဖြင့် ရူပီး‌ငွေ (၈၂.၀၁) ကုဋေ ရှိသော သီးနှံမျိုးစေ့ထုပ် (seed mini kits) ပေါင်း (၂၀၂၇၃၁၈) ထုပ်ကို ဖြန့်ဝေပေးရန် အဆိုပြုထား ကြောင်း၊အိန္ဒိယအစိုးရသည် ပဲစင်းငုံအား သီးညှပ် (Intercropping)စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လွန်ခဲ့သော(၁၀) နှစ်အတွင်း အထွက်နှုန်း ၁ ဟက်တာလျှင် (၁၅)ကွင်တယ်အောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိသော အသိအမှတ် ပြုမျိုးစေ့များ (certified seeds)အပါအဝင် မျိုးစေ့ထုပ် (၁၃၅၁၇၁၀)ထုပ်ကို လည်းကောင်း၊ ပဲတီစိမ်းကို သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်အတွင်း အထွက်နှုန်း (၁၀) ကွင်တယ်/ ဟက်တာ အောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိသည့် မျိုးစေ့ထုပ် ၄၇၃၂၉၅ ထုပ်ကိုလည်းကောင်း အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ မတ်ပဲသီးနှံကိုမူ သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်အတွင်း အထွက်နှုန်း (၁၀) ကွင်တယ်/ဟက်တာအောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိသည့် မျိုးစေ့ထုပ် (၉၃၈၀၅) ထုပ်နှင့် Sole Crop အဖြစ် သီးသန့်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လွန်ခဲ့သော (၁၅)နှစ်အတွင်း အထွက်နှုန်း(၁၀)ကွင်တယ်/ဟက်တာ အောက် လျော့နည်းခြင်းမရှိသည့် မျိုးစေ့ထုပ် (၁၀၈၅၀၈) ထုပ်တို့ကို ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထက်ပါ သီးညှပ်နှင့် သီးသန့်စိုက်ပျိုးရန် ဖြန့်ဝေမည့်မျိုးစေ့များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးရာသီ အတွင်း ဧရိယာဟက်တာပေါင်း (၄.၀၅)သိန်းအားလွှမ်းခြုံမှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဗဟိုအစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေမှ ကျခံ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊၎င်းအပြင် ပြည်နယ်အစိုးရများ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ယခုနှစ် မိုးသီးနှံပဲမျိုးစုံ အား ပုံမှန်စိုက်ဧကထက် ပိုမိုတိုးချဲ့မှုများတွင်လည်း ဗဟိုအစိုးရက ရန်ပုံငွေ မျှဝေကျခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်လယ်သမားများဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပဲစင်းငုံ သီးညှပ် စိုက်ပျိုးမှုအား အန္တရာပရာဒေ့ရှ်၊ ချတ္တဂါ၊ ဂူဂျရတ်၊ ဟာရီယာနာ၊ ကာနာတကာ၊ မဒ္ဒရာပရာဒေ့ရှ်၊ မဟာရဋ္ဌ၊ ရာဂျပ်စတန်၊ တမီနာဒူ၊ တဲလန်ဂါနာနှင့် ဥတ္တာပရာ‌ဒေ့ရှ် ပြည်နယ်(၁၁) ခုရှိ ခရိုင်ပေါင်း (၁၈၇) ခုတွင် စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပဲတီစိမ်းသီးညှပ်စိုက်ပျိုးမှုကို အန္တရာပရာဒေ့ရှ်၊ ဂူဂျရတ်၊ ဟာရီယာနာ၊ ကာနာ (၈၅) ခုတွင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မတ်ပဲသီးနှံ သီးညှပ်စိုက်ပျိုးခြင်းအား အန္တရာပရာဒေ့ရှ်၊ ကာနာ တကာ၊ မဒ္ဒရာပရာဒေ့ရှ်၊ မဟာရဋ္ဌ၊ တမီနာဒူနှင့် ဥတ္တာပရာ‌ဒေ့ရှ် ပြည်နယ်(၆) ခုရှိ ခရိုင်ပေါင်း(၆၀) ခုတွင် ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး သီးသန့်စိုက်ပျိုးမှုမှာ ၎င်းပြည်နယ်(၆ ) ခုကို လွှမ်းခြုံမှုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ ယခုနှစ် မိုးသီးနှံ ပဲမျိုးစုံမျိုးစေ့ ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အား ခရိုင်အလိုက် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများအကြား စဉ်ဆက်မပြတ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုး ရေး ကျင့်စဉ်ကောင်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် သီးနှံစိုက်ပျိုးသည့် ရာသီကာလအတွင်း ခရိုင်စိုက်ပျိုးရေးရုံးများနှင့် ATMA network တို့မှတစ်ဆင့် ခရိုင်အဆင့် သင်တန်းများကို ပို့ချမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခရိုင်အဆင့်၌အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားသည့်နေရာဒေသများသို့ သီးနှံမျိုးစေ့များ ဖြန့်ဖြူး ခြင်းကို ၁၅-၆-၂၀၂၁ နေ့အပြီး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်-အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့ စီးပွားရေးသံမှူးပေးပို့လာသည့်သတင်းများ)
Read more about ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းများ
၁။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် စတော်ဘယ်ရီသီးအမြောက်အများကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ရာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်၍ တန်ချိန် (၄၉၃)တန်၊ တန်ဖိုး ယန်း(၁)ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး အမြင့်မားဆုံးသော တင်ပို့မှု တန်ဖိုးအဖြစ် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်း၌လည်း တန်ချိန်(၄၀၀)ကျော်ဖြင့် ဆက်လက် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး (၂)လဆက်တိုက် တင်ပို့မှုမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် စတော်ဘယ်ရီသီးများသည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး အရသာလည်း ထူးခြားကောင်းမွန်၍ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာတွင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် လူအများအပြား နေအိမ်တွင်သာ ချက်ပြုတ်စားသောက်နေထိုင်ကြခြင်း တို့သည် စတော်ဘယ်ရီသီးတင်ပို့မှုကို မြင့်မားစေသည့် အဓိက အချက်များဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ စတော်ဘယ်ရီသီး အဓိကတင်ပို့နေသည့်နိုင်ငံများမှာ ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ တရုတ်(တိုင်ပေ)နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ အစပြုကာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စတော်ဘယ်ရီသီးတင်ပို့မှု မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း တန်ချိန်(၁၂၃၇)ဖြင့် အမြင့်ဆုံးသော စံချိန်သစ် တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း၊၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှု အားနည်းခဲ့သဖြင့် တန်ချိန် (၁၀၀၀) အောက်ကျဆင်းသွားခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ၍ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုအခက်အခဲများ ရှိခဲ့သော်ငြား တင်ပို့မှု တန်ချိန် (၁၁၉၇)အထိ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြီးနောက် ဒုတိယမြောက် တင်ပို့မှု အများဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ တင်ပို့ခဲ့မှုသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ တင်ပို့မှုထက် (၁၁.၅)ဆ သာလွန်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ နှင့်မတ်လ(၂)လတာ ကာလအတွင်း တင်ပို့ခဲ့မှုမှာ (၉၁၃)တန် ရှိခဲ့သဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကတင်ပို့မှု၏ ၈၀% သို့ ရောက်ရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် စတော်ဘယ်ရီသီးများသည် ပြည်ပ နိုင်ငံများ၏ ဈေးကွက်တွင် ပြည်တွင်း၌ ရောင်းချသည့်ဈေးနှုန်းထက် ၃ ဆမှ ၆ ဆ အထိ မြင့်မားသည့်ဈေးနှုန်းများ ရရှိခြင်းမှာ အရွယ်အစားနှင့်အရသာကောင်းမွန်သဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လူချမ်းသာ များအကြား လူကြိုက်များ၍ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန် ကမ္ဘာတလွှား လေကြောင်း လိုင်းပြေးဆွဲမှုများလျှော့ချလိုက်ရာ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လူအများစုသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကာ စတော်ဘယ်ရီသီးစားသုံးမှု မပြုနိုင်ကြတော့၍ ၎င်းတို့နေအိမ်များမှပင် စားသုံးလိုကြသဖြင့် ဝယ်လိုအားများ အလွန်မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှထွက်ရှိသည့် စတော်ဘယ်ရီသီးများ ပြည်ပတင်ပို့မှုမြင့်မားနိုင်သည့် အလားအလာများရှိသဖြင့် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စတော်ဘယ်ရီသီးအများဆုံး စိုက်ပျိုးသည့် တိုးချိဂိစီရင်စု ဒေသတွင်လည်း cross-border online shopping sites များကိုအသုံးပြု၍ ဟင်းချက်နည်းသင်တန်းများဆောင်ရွက်ကာ စင်ကာပူနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံများသို့ ပို့ကုန်မြှင့်တင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသကဲ့သို့ အခြားသောပြည်ပဈေးကွက်များသို့လည်း စတော်ဘယ်ရီသီး တင်ပို့မှုများ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကလည်း ၂၀၂၅ ခုနှစ်အရောက်တွင် စတော်ဘယ်ရီသီးတင်ပို့မှုမှ ဝင်ငွေ ယန်း (၈.၆) ဘီလီယံရရှိနိုင်ရန် မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိ/မရှိ လျှင်မြန်စွာစစ်ဆေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းကို သုတေသီများက တီထွင်ခဲ့ ကြခြင်း
၂။ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုတက္ကသိုလ်နှင့် အခြားသောသုတေသနဌာနများမှ သုတေသီများ ပါဝင်ကြသည့် ပညာရှင်အဖွဲ့သည် ၅ မိနစ်အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိ/မရှိကို လျှင်မြန်စွာစစ်ဆေးနိုင်မည့်နည်းလမ်း တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့ကြရာ ထိုနည်းလမ်းသစ်သည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစစ်ဆေးမည့်နမူနာများကို (၁) စတုရန်းစင်တီ မီတာ၌ ချိုင့်ခွက်ငယ်လေးများ (၁)သန်း ခန့်ပါဝင်သည့် ဖန်သားပြင်တစ်ခုအပေါ်တွင် တင်ထားကာ စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အလွန်သေးငယ်သည့် အခန်းငယ်လေးများနှင့်အသွင် သဏ္ဍာန်တူသည့် အဆိုပါချိုင့်ခွက်ငယ်လေးများကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း အသုံးပြုကာ ပုံဖော်ဖန်တီးထားပြီး အဆိုပါ အခန်းငယ်တိုင်းတွင် ဓါတ်စမ်းပစ္စည်းတစ်ခုစီပါဝင်ပြီး စစ်ဆေးမည့်နမူနာတစ်ခုကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ RNA ပါရှိပြီဆိုပါက အဆိုပါအခန်းငယ်မှအလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်ပေးကြောင်း၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးနေကျ PCR စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းနှင့်မတူဘဲ အလွန်သေးငယ်သည့် မိုက်ခရိုအခန်းငယ်လေးတစ်ခုအတွင်း၌ပင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ RNA အနည်းငယ်ဖြင့်ပင် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကို ထပ်မံအသေးစိတ် စစ်ဆေးရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်း၊ PCR စစ်ဆေးရန် အချိန်(၁)နာရီ (သို့) (၁)နာရီထက်ပို၍ အချိန်ကြာနိုင်သော်လည်း ယခု တီထွင်စမ်းသပ်မှု နည်းလမ်း အရ ၅ မိနစ်အတွင်း ရောဂါပိုးရှိ/မရှိကို အဖြေထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် စားသုံးသူများအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိခြင်း
၃။ ဟောင်ကောင်ဒေသ၏ စူပါမားကတ်များရှိနေ့စဉ်သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း (၂၃၀)မျိုး ကို စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် စားသုံးသူရေးရာကောင်စီ(Consumer Council)၏ စာရင်းများအရ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းထက် ပိုမိုမြင့်မားလျှက်ရှိရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှ(၁.၉%) မြင့်တက်ခဲ့သဖြင့် စားသုံးသူဈေးဆနှုန်းကိန်း(Consumer Price Index-CPI) ထက်(၀.၃%) ပိုမိုမြင့်မားနေပြီး စားသုံးသူများအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ်သတင်းစာ၌ ရေးသားဖော်ပြထားရာ အဆိုပါသတင်း၌ ဟောင်ကောင်ဒေသရှိ စူပါမားကတ် ဆိုင်ကြီးများတွင် တစ်နှစ်တာအတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်ကိုလည်း ဖော်ပြထားကြောင်း၊ စည်သွပ်ဘူးများ၏ဈေးနှုန်းမှာ (၁၉.၉%) မြင့်တက်လျှက်ရှိပြီး စည်သွပ်ဗူးအမျိုးအစား (၁၈)မျိုးကို စစ်တမ်း ကောက်ယူရာတွင် အသားဘူးများ(၂၅.၁%)၊ ငါးဘူးများ (၁၅.၄%)၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်(သို့) စွပ်ပြုတ်ဘူး များမှာ(၁၇.၇%) အသီးသီးမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ Greatwall အမှတ်တံဆိပ် ဝက်ခုတ်သားမှာ(၃၂.၇%)နှင့် (၁၉၈)ဂရမ်ရှိသော ဝက်ပေါင်ခြောက် ဈေးနှုန်းမှာ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ (၁၀.၇၀) မှ (၁၄.၂၀)ဒေါ်လာ သို့ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ပေါင်မုန့်၌ သုတ်စားသော ဒိန်ခဲပျော့ပါမုန့်နှင့် ကိတ်မုန့် အစရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများတွင် (၆.၄%) မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆန်ဈေးနှုန်းမှာ (၃)နှစ် ဆက်တိုက်မြင့်တက်လျှက်ရှိပြီး နောက်ဆုံးနှစ်စာရင်းတွင် (၄.၇%)ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန်အမျိုးအစား(၉)မျိုးကို စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် Golden Elephant Premium Rice ၏ 8 kg တစ်အိတ်လျှင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ(၉၆)ဒေါ်လာမှ (၁၀၄.၇၁၀) ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဖြစ်လာရာ (၉.၁%) သို့လည်းကောင်း၊5kg တစ်အိတ်လျှင် ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ (၆၅.၉) ဒေါ်လာ မှ (၇၃.၈) ဒေါ်လာ ေးနှုန်းဖြစ်လာရာ (၁၂%)သို့လည်းကောင်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဈေးနှုန်းကျဆင်းခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား(၄)မျိုးတွင် နို့မှုန့်၊ ကလေးငယ်များ တစ်ခါသုံးအညစ်အကြေးဂွမ်းစများ၊ တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သုံးပစ္စည်းများနှင့်အသင့်သုံးစွဲနိုင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ ဖြစ်သည့်အဖျော်ယမကာများ၊ တစ်ရှူး များ၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစားအစာများ အစရှိသည်တို့ပါဝင်ကြောင်း၊ စားသုံးသူရေးရာကောင်စီက စူပါမားကတ်ဆိုင်များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ကမ္ဘာ့ကပ် ရောဂါကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ခက်ခဲသည့်အချိန်ကာလအတွင်းတွင် အခြေခံစားသောက်ကုန်များနှင့် နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ၏ ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပြီး လူမှုတာဝန်သိမှုကို ပိုမို ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ အနိမ့်ဆုံးဈေး သတ်မှတ်ရောင်းချမှုကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ က စတင်၍ “Low Prices Locked Campaign”ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လကပြီးဆုံးခဲ့ရာ ထပ်မံ၍ကုန် ပစ္စည်း(၃၅၀)မျိုးအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ အောက်တိုဘာလအထိ နောက်ထပ်(၆)လခန့် အနိမ့်ဆုံးဈေး သတ်မှတ်ရောင်းချမည်ဟုကြေညာခဲ့ပြီး နောက်အဆိုပါ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ “Low Prices Locked Campaign” ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ စရိတ် မြင့်တက်လာမှုများနှင့် အခြားသောကုန်ကျစရိတ်များ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ၎င်းတို့ လုပ်ငန်း အနေဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၄။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံအစိုးရသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အပိုဆောင်း ထောက်ပံ့မှုများပေးနိုင်ရန် လိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်းက ကြေငြာခဲ့ပြီး ၎င်းအစီအစဉ်အရ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာ အစီအစဉ်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် နောက်ထပ် (၁၂)လ အထိ သက်တမ်းတိုးမည့် Business Events Bid Fund အစီအစဉ်အတွက် အေဒေါ်လာ (၃)သန်းကို ထပ်မံပေးအပ်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဉီးဆောင်သည့် စီးပွားရေးအစီအစဉ်များဖြစ်သည့် ရောင်းချခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုလျှက်ရှိသော ပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ မြှင့်တင်မည့် အစီအစဉ်အတွက် ဒေါ်လာ(၁)သန်းကို ထပ်မံပေးအပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးက ကိုဗစ်-၁၉ ကာလမတိုင်မီ စီးပွားရေးအစီအစဉ်ကဏ္ဍသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံစီးပွားရေးကို အေဒေါ်လာ ၃၆ ဘီလီယံအထိ အကျိုးပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ Business Events Bid Fund အစီအစဉ် စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှစတင်၍ စီးပွားရေးတန်ဖိုး အေဒေါ်လာ (၄၁၁) သန်းရှိ နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်များကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ အပေါ် ကျန်းမာရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်သက်ဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည့်နေရာဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အစီအစဉ်များ ပိုမိုရရှိစေရန် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို မြောက်အမေရိက၊ ယူကေနှင့်ဉရောပတို့ရှိ ပွဲစီစဉ်သူများကို ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအစီအစဉ်များ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကျင်းပနိုင်ရေး ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် Business Events Grant Program အတွက် အေဒေါ်လာ သန်း (၅၀)ကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ က ပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ၊ ညီလာခံများ၊ ကုန်စည်ပြပွဲများ တက်ရောက်နိုင်ရန်နှင့် ပြည်တွင်းခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွင် သုံးစွဲရန် လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအတွက် အေဒေါ်လာ (၁.၂) ဘီလီယံ ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသို့ စီးပွားရေးအစီအစဉ်များ လာရောက်တက်ရောက်ကြရာတွင် ဟိုတယ်ခန်းများ ငှားရမ်းခြင်း၊ ကော်ဖီဆိုင်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူစားသောက်ခြင်း၊ ဈေးဆိုင်များနှင့် ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် ခရီးသွား အပန်းဖြေနေရာများသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေး အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် သတင်းကောင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ကို သိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ကင်ဘာရာမြို့ စီးပွားရေးသံမှူးပေးပို့သည့်သတင်း)
သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ထုတ်ကုန်များ အဓိကတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံများတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း
၅။ World Wide Fund for Nature (WWF) ၏ အစီရင်ခံစာအရ သစ်တောပြုန်းတီးမှု ဖြစ်စေနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များတင်သွင်းမှု၌ အီးယူသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏အနောက်တွင် ဒုတိယ အများဆုံး တင်သွင်းသူ အဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသည် အဆိုပါထုတ်ကုန်များကို အဓိက တင်သွင်းသည့် ဥရောပနိုင်ငံ (၈)နိုင်ငံတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တင်သွင်းခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်များ မှတစ်ဆင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု ဟက်တာပေါင်း (၃.၅)သန်းအတွက် အီးယူက တာဝန်ရှိခဲ့သည်ဟု WWF ၏ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားကြောင်း၊ အဆိုပါနှုန်းထားသည် အစီရင်ခံစာမှဖော်ပြသည့်ကာလအတွင်း ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း အီးယူအနေဖြင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု အားလုံး၏ (၁၆%)ကို ကိုယ်စားပြုနေဆဲဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ (၂၄%)၏နောက် ဒုတိယနေရာ၌ ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဓိက ထုတ်ကုန်များမှာ ပဲပုပ်စေ့၊ ဆီအုန်း၊ အမဲသား၊ သစ်တောထွက်ကုန်များ၊ cocoa(ကိုကိုး)နှင့် ကော်ဖီတို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ WWF ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ဗြိတိန်၊ နယ်သာလန်၊ ပြင်သစ်၊ ပိုလန်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတို့သည် အီးယူမှ သစ်တောပြုန်းတီးမှု နှင့်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များတင်သွင်းမှု၏ (၈၀%)ခန့်ကို စုပေါင်းကိုယ်စားပြုထားကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဥရောပပါလီမန်သည် သစ်တောပြုန်းတီးမှု ပြဿနာဖြေရှင်းရေးဥရောပကော်မရှင်အား တောင်းဆိုသည့် Resolution တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး ကော်မရှင် အနေဖြင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဥပဒေသစ်ပြဌာန်းမည့် အဆိုပြုချက်ကို တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံက ၂၀၂၂ ခုနှစ် မှစတင်၍ ဇီဝလောင်စာများတွင် ပဲပုပ်နှင့် ဆီအုန်းအသုံးပြုမှုကို ပိတ်ပင်တားမြစ်သွားမည်ဖြစ်ခြင်း
၆။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသည် သစ်တောပြုန်းတီးမှုပပျောက်ရေးဆောင်ရွက်ချက်၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဇီဝလောင်စာများတွင် ပဲပုပ်နှင့်ဆီအုန်းအသုံးပြုမှုကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပိတ်ပင်တားမြစ်သွားမည်ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဖြစ်သူက ကြေငြာခဲ့ကြောင်း၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့နည်းတူ ဆီအုန်းမှပြုလုပ်သည့် ဇီဝ လောင်စာများကို ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဈေးကွက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတို့၌ သုံးစွဲခွင့်ပြုတော့ မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သယ်ယူပို့​ဆောင် ရေးတွင် သုံးသည့် ဇီဝလောင်စာများ၌ ပဲပုပ်ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုမှုကိုလည်း ၂၀၂၃ ခုနှစ် မှစတင်၍ တားမြစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းဇီဝလောင်စာများသည် သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ ဇီဝမျိုးစုံ/မျိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးမှုတို့ကို ဉီးတည်စေနိုင်ကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဈေးကွက်၌အသုံးပြုမည့် ဇီဝဒီဇယ်ပမာဏကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဘောလုံးကွင်းအရေအတွက် (၁)သိန်းကျော် ဧရိယာရှိသည့် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ လိုအပ်ကြောင်း၊ လေ့လာမှုများအရ ယင်းဆီအုန်း စိုက်ခင်းများ၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် သစ်တောပြုန်းတီးသည့် မြေများပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးကုန်စည်များ နှင့်ဆက်စပ်သည့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု လျော့နည်းပပျောက်ရေး သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သော အမ်စတာဒမ်မိတ်ဖက်ကြေညာချက် (Am –sterdam Declarations Partnership) သို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ယခုဆောင်ရွက်ချက်သည် ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအစီအမံတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကြေငြာချက်တွင် ဘယ်လ် ဂျီယံ၊ ဒိန်းမတ်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊နော်ဝေ၊စပိန်၊နယ်သာလန်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က လက်မှတ် ရေးထိုးထားကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံအစိုးရသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အသုံးပြု ရထားပို့ဆောင်ရေး နည်းလမ်းကို အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဇီဝလောင်စာဝယ်လိုအားကို လျှော့ချ သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၂၀၂၁-၂၂ စိုက်ပျိုးရေးနှစ်၌ ကောက်ပဲသီးနှံ တန်ချိန် ၃၀၇.၃၁ သန်းအထိ တိုးတက်ထွက်ရှိရန် အိန္ဒိယအစိုးရက အစီအမံများချမှတ်ခြင်း
၇။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တောင်သူလယ်သမားများဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၂၁ ခု နှစ် မိုးသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် ညီလာခံ (National Conference on Agriculture for Kharif Campaign-2021) ကို ၃၀-၄-၂၀၂၁ နေ့၌ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး နာရင်ဒရာဆင်းတိုမာ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက လယ်ယာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေး အစီအမံများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ၃၀-၄-၂၀၂၁ နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရာ၌ အဆိုပါညီလာခံ တွင် ၂၀၂၀-၂၁ ခုနှစ်အတွက် ကောက်ပဲသီးနှံထွက်ရှိမှုကို တန်ချိန် ၃၀၁.၉၂ သန်းရရှိရန် ရည်မှန်းချက် ထားရှိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဒုတိယအကြိမ်ခန့်မှန်းချက်အရ တန်ချိန် ၃၀၃.၃၄ သန်းအထိ ရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိ ကြောင်း၊ ယခင်နှစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုထက် ၁.၉၆% တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ပဲမျိုးစုံ၌ တန်ချိန် ၂၄.၄၂ သန်းနှင့် ဆီထွက်သီးနှံတွင် တန်ချိန် ၃၇.၃ သန်းအထိ ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ တောင်သူလယ်သမားများ၏ ထိုသို့စံချိန်တင်ထွက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်မှုအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါကြောင်း၊ ရှေ့လာမည့် ၂၀၂၁-၂၂ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးနှစ်တွင် ကောက်ပဲသီးနှံတန်ချိန်ပေါင်း ၃၀၇.၃၁ သန်း ထွက် ရှိရန် လျာထားကြောင်း၊ အတ္တမနိဗ္ဗာဘာရတ်ခေါ် အိန္ဒိယ၏ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားဖြင့် ရှင်သန်ရပ်တည်မှု ရည်မှန်းချက်ကို ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ရာ၌ ပြည်ပမှတင်သွင်းနေရမှုအပေါ် အမှီပြုနေရသည့် ပဲမျိုးစုံ နှင့် ဆီထွက်သီးနှံတို့ကို အထွက်တန်ချိန် ပမာဏ မြင့်မားစွာရရှိရန် ဦးတည်ချက်ချမှတ်ထားကြောင်း၊ ၎င်းသီးနှံအုပ်စု ၂ ခုအား ပြည်တွင်း၌ ပြတ်လပ်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရများ အနေဖြင့် စစ်ဆင်ရေး သဖွယ် သဘောထား၍ လုပ်ဆောင်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဈေးကွက် ချိတ်ဆက်ရရှိနိုငိသည့် အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များအား တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နယ်မြေဒေသများကို ပြည်နယ်များ၌ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်းနှင့် ဗဟိုအစိုးရမှ လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဝန်ကြီး နာရင်ဒရာဆင်းတိုမာက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
၈။ အဆိုပါ ညီလာခံ၌ အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် တောင်သူလယ်သမားများ ဖူလုံရေးဦးစီးဌာနမှ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ရှင်တော်မင်ကြီး ဒေါက်တာ ဆူရတ်မဟိုထရာ က မိုးသီးနှံရာသီ (Kharif season) ကာလ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု၊ သီးနှံစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်မှု၊ သီးနှံမျိုးစေ့နှင့် သွင်းအားစုများ ရရှိနိုင်မှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်း၏ပြောဆိုမှုအရ အထူးစီမံကိန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု၏ ရလာဒ်အဖြစ် Zaid season ခေါ်နွေသီးနှံရာသီ၌ စိုက်ပျိုးမှု ဧရိယာသည် ဟက်တာ ၆၃.၄၄ သိန်း ရှိရာမှ ဟက်တာ ၇၅.၇၅ သိန်းသို့ တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ၂၀၂၀-၂၁ ခုနှစ်တွင် ကောက်ပဲသီးနှံ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ တိုးတက်လာကြောင်း၊ ယခုနှစ် မုတ်သုံရာသီမှာ ပုံမှန်အခြေအနေ (ကာလရှည် ပျမ်းမျှတွက်ချက်မှု၏ ၉၈% ခန့်) အတိုင်း ကောင်းမွန်ဖွယ်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း၊ ယခင်နှစ် ရိတ်သိမ်းချိန်ကာလ၌ အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသော ပဲပုတ်နှင့် ပြောင်းသီးနှံတို့မှအပ ကျန်သီးနှံများအတွက် မျိုးစေ့လုံလောက်မှုရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်တောင်သူလယ်သမားများ ဖူလုံရေးဆိုင်ရာ အတွင်းဝန် ဆန်ဂျေးအာဂါဝယ်က ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနများအနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများထံသို့ မျိုးစေ့နှင့် မြေဩဇာများကို အချိန်မီ ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် သွင်းအားစု လိုအပ်ချက်အား ခန့်မှန်းတွက်ချက်လျက် ဗဟိုအစိုးရထံ တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အိန္ဒိယ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည် မိုးသီးနှံများအတွက် မျိုးစေ့နှင့်ဆက်စပ်သွင်းအားစု ထောက်ပံ့မှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
စက်သုံးဆီများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရောင်းဈေးနှုန်းများ သုံးသပ်ချက်
ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီဈေးကွက်တွင် ဓာတ်ဆီ ဈေးနှုန်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ Global Petrol Prices Websites ၌ ဖော်ပြထားရှိသည့် ဈေးနှုန်းများအရ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၂ နိုင်ငံအနက် Lesotho နိုင်ငံသည် ယခင်အပတ်ဈေးနှုန်းထက် ၁၃.၂ %၊ Jamaica နိုင်ငံသည် ၂.၂% တို့ဖြင့် ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံပေါင်း (၂၉) နိုင်ငံ ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း အာဂျင်တီးနား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ထိုင်း၊ UAEနှင့် ဗီယက်နမ် စသည့် နိုင်ငံပေါင်း (၁၁၆)နိုင်ငံမှ ဈေးနှုန်း မပြောင်းလဲပဲ ဓါတ်ဆီဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ ဓါတ်ဆီ ဈေးနှုန်းကျဆင်းနေသည့် နိုင်ငံများ အနေဖြင့် ဩစတြေးလျ၊ ဘူဂေး ဒီးယား၊ ဒိန်းမတ်၊ လဗန်နွန်၊ ဆွီဒင်စသည့် နိုင်ငံပေါင်း (၁၈)နိင်ငံမှ ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းနေပြီး ယခင်တစ်ပတ် ဈေးနှုန်းထက် ၀.၃% မှ ၂.၅ % ထိ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ Global Petrol Prices Website တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းအနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံများ
ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်တွင် Global Petrol Prices Website ဖော်ပြထားရှိသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၂ နိုင်ငံအနက် Lesotho နိုင်ငံသည် ယခင်အပတ်ဈေးနှုန်းထက် ၁၃.၂ % ၊ Jamaica နိုင်ငံသည် ၂.၂% တို့ဖြင့် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံပေါင်း (၂၉) နိုင်ငံ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ ယခု တစ်ပတ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘူတန်၊ တရုတ်၊ ကျူးဘား၊ ဒိန်းမတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အင်ဒိုနီးရှားစသည့် နိုင်ငံများအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း(၉၉)နိုင်ငံမှ ဒီဇယ် ဈေးနှုန်း ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ ယခင်အပတ်များအတိုင်း တည်ငြိမ်လျက် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားသည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် ဩစတြေးလျ၊ ဘူဂေး ဒီးယား၊ ဖင်လန်၊ဂရိ၊အိုင်လန်၊ အိုင်ယာလန်၊လဗန်နွန်၊နယူးဇီလန်စသည့် နိုင်ငံပေါင်း (၁၄) နိုင်ငံမှ ဈေးနှုန်းများကျဆင်းနေပြီး ယခင်တစ်ပတ် ဈေးနှုန်းထက် ၀.၂ %မှ ၀.၉ % အထိ ဈေးနှုန်းကျဆင်းနေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ Global Petrol Prices Website တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းအနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံများ
အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်တွင် Global Petrol Prices Website ၌ ဖော်ပြထားရှိသည့် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ယခင်အပတ်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁% ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ၀. ၅% တို့ဖြင့် ဈေးနှုန်း မြှင့်တက် ခဲ့ပြီး ကျန်အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ မရှိဘဲ တည်ငြိမ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အာဆီယံနိုင်ငံများ ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Global Petrol Prices Website ၌ ဖော်ပြထားရှိသည့် ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ယခင်အပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ် လျှင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ၁.၈% နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁.၁% တို့ဖြင့် ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး၊ ကျန်အာဆီယံနိုင်ငံ များတွင် ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲမရှိ တည်ငြိမ်နေခဲ့ ကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပါသည်။
အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်တစ်လီတာ ဈေးနှုန်းများအား အောက်ပါ အတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-
ရေတွက်ပုံ - လီတာ
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်တွင် Global Petrol Prices Website ၌ ဖော်ပြထားရှိသည့် ကမ္ဘာ့စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းမှာ ဓါတ်ဆီ တစ်လီတာတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၁၅ နှင့် ဒီဇယ်တစ်လီတာတွင် ၁.၀၂ ရှိပြီး စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းနိုင်ငံအလိုက် နည်း/များတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဓာတ်ဆီ ဈေးနှုန်း တစ်လီတာ ၀.၆၉ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် နိုင်ငံ ၂၉ မြောက်နှင့် ဒီဇယ်ဆီ ဈေးနှုန်းတစ်လီတာ ၀.၆၃ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် နိုင်ငံ၂၉ မြောက်တွင် ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်မှုအများဆုံး ဆောင်ရွက်နေသော တရုတ် ၊ ဂျပန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ စက်သုံးဆီ တစ်လီတာဈေးနှုန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ သည်-
Oil-Price. Net Website ၌ ဖော်ပြထားရှိသည့် ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်း (Crude Oil ) နေစဉ်ဈေးနှုန်းများအား အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပါသည်-
၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်မှ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့အထိ အပတ်စဉ် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်နှင့် ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုများကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-
ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် Nay Pyi Taw Denko စက်သုံးဆီ ဆိုင်များ၏ ရောင်းဈေးများအရ မေလ ၄ ရက်တွင် အောက်တိန်း 92 တစ်လီတာလျှင် ၉၇၀ကျပ်၊ အောက်တိန်း 95 တစ်လီတာလျှင် ၁၀၆၀ ကျပ်၊ ဒီဇယ်တစ်လီတာလျှင် ၉၇၅ ကျပ်နှင့် ပရီမီယံ ဒီဇယ်တစ်လီတာလျှင် ၉၉၀ကျပ်ဖြင့် ပေါက်ဈေးရှိကြောင်း သိရှိရပါ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ မြို့ကြီးများ၌ နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ် နေသော စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအား လေ့လာရာတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလန်လျှင် ၄၇၅၀ ကျပ်၊ ဒီဇယ်တစ်ဂါလန်လျှင် ၄၆၄၀ ကျပ်၊ လားရှိုးမြို့တွင် ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလန်လျှင် ၄၆၀၀ ကျပ်၊ ဒီဇယ်တစ်ဂါလန်လျှင် ၄၅၀၀ ကျပ်၊ မကွေးမြို့ တွင် ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလန်လျှင် ၄၄၅၀ ကျပ်၊ ဒီဇယ်တစ်ဂါလန်လျှင် ၄၄၀၀ ကျပ်တို့ဖြင့် ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့ကြီးများ၏ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများမှာ ယခင်အပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျင် ဈေးနှုန်း အနည်းငယ် မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Read more about စက်သုံးဆီများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရောင်းဈေးနှုန်းများ သုံးသပ်ချက်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ
အစားအစာ လုံခြုံစိတ်ချလုံလောက်မှုရှိစေရေး ဉီးစားပေးဆောင်ရွက်သွားရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည့်သတင်း
၁။ နိုင်ငံ၏ အစားအစာလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရေး လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ လုံလောက်အောင် ရောင်းချနိုင်ရေးတို့ကို ဉီးစားပေးဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နွေဉီးရာသီ ကောက်ပဲသီးနှံ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းပြင်ဆင်မှု၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များလုံလောက်စေရန်၊ ဈေးနှုန်းများ တည်ငြိမ်စေရန် ဉီးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံထုတ်လုပ်ရေး မူဝါဒထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ တရားဝင် website ၌ ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားကြောင်း၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကောက်ပဲသီးနှံ ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိမှုပမာဏ ကီလိုဂရမ် (၆၅၀)ဘီလီယံအထက် ဆက်လက်ရရှိရန်၊ နိုင်ငံ၏ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာစေရန်၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိမှု တည်ငြိမ်စေရန်၊ အဓိကဖြစ်ပွားတတ်သည့် တိရစ္ဆာန်ရောဂါများ၊ အပင်ပိုးမွှား ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ အစားအစာလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိခြင်း၊ အရေးပါသည့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာရောင်းချခြင်းတို့ဖြင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်လာစေရန် အခြေခံကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာအခက်အခဲများ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေး၊ ပြည်တွင်းမျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ရေး ၊ ကျေးလက်ဒေသများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေး စသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ လကုန်ပိုင်းတွင် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးလက်ဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဉီးစားပေးလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်မှာ (၁၈)နှစ်ဆက်တိုက် ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- ပေကျင်းမြို့ စီးပွားရေးသံမှူး ပေးပို့သည့်သတင်း)
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဟောင်ကောင်ဒေသအပေါ် သဘောထား အနည်းငယ်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့် သတင်း
၂။ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဟောင်ကောင် ဒေသ အပေါ် သဘောထား အနည်းငယ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ဟု မှတ်ယူရကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လက ဟောင်ကောင်ဒေသအတွက် ပြဌာန်းခဲ့သည့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နှင့် ပေကျင်းတို့အကြား တင်းမာမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အဆိုပါတင်းမာမှုကြောင့် ပေကျင်း နှင့်ဟောင်ကောင်ဒေသရှိ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအား ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများကို ယခုအချိန်ထိ ဆက်လက်ပြုလုပ်လျှက်ရှိသော်လည်း နိုင်ငံတကာငွေကြေးအချက်အချာကျသည့် ဟောင်ကောင်ဒေသ၏အနေအထားကို ကြီးမားသည့်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါကန့်သတ်မှုကြောင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ (အထူးသဖြင့် သတိထားဆောင်ရွက်ရသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများတင်ပို့မှု) အပေါ် သက်ရောက်မှုများဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်ဟောင်ကောင်ဒေသမှ အစိုးရိမ်ဆုံးအရာဖြစ်သည့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လဲလှယ်မှု၌ Peg လုပ်ထားမှုအား ဝါရှင်တန်မှဖယ်ရှားရန် ဆက်လက်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်မှု မရှိကြောင်း၊ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အုပ်ချုပ်မှုလက်ထက် ပထမဆုံးအကြိမ် အစီရင်ခံစာ ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိကြောင်း၊ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် ဟောင်ကောင်ဒေသသည် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆက်လက်ရရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် တရုတ်ပြည်မကြီးမှ ငွေကြေးမူဝါဒ အပေါ်တွင် မှီခိုမှုမရှိကြောင်း၊ ပေါ်လွင်အောင်အသားပေးရေးသားဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
‌ဈေးကွက်အတွင်းသို့ သီးနှံဝင်ရောက်မှု နည်းပါးသဖြင့် ပြောင်းစေ့အရောင်းအဝယ်များ ကျဆင်းလျှက်ရှိသည့်သတင်း
၃။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလဆန်းပိုင်းတွင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံပြောင်းဈေးကွက်သို့ သီးနှံဝင်ရောက်မှု နည်းပါးသဖြင့် အရောင်းအဝယ်များကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ လတ်တလောကာလတွင် တောင်သူများ အနေဖြင့် ပဲပုတ်စေ့သီးနှံ ရိတ်သိမ်းမှုအား အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေရသဖြင့် အခြားသီးနှံများ တင်ပို့ရောင်းချမှုများအား ခေတ္တရပ်နားထားရကြောင်း၊ ဝယ်လိုအားရှိ၍ ဈေးနှုန်းအမြင့်ဖြင့် ဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း ပြောင်းသီးနှံများ ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်မှု လျော့နည်းနေသည့် အတွက် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုတွင် ကျဆင်းလျှက် ရှိနေကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အနေဖြင့် ချီကာဂိုစတော့ဈေးကွက်တွင် သီးနှံရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍကို တိုးချဲ့သတ်မှတ်ပေးထားကြောင်း၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ပြောင်းသီးနှံဈေးကွက်သည် ဈေးနှုန်းအမြင့်များဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း မျှော်လင့် မထားသည့်အရောင်းအဝယ်ကျဆင်းမှုများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ဘရာဇီးလ် သီးနှံဈေးကွက် တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံကြည့်ပါက ဈေးကွက်သို့ ဒေသအသီးသီးမှသီးနှံများတင်ပို့ရန် အခက်အခဲများ ရှိနေကြောင်း၊ တောင်သူများအနေဖြင့်လည်း ပြောင်းစေ့များဈေး ကွက်တင်ပို့ရေးထက် ပဲပုတ်စေ့ အချိန်မီရိတ်သိမ်းပြီးစီးရေးအပေါ်တွင်သာ အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နေရကြောင်း၊ သီးနှံဈေးကွက် တွင် သီးနှံဝယ်ယူရေးအမှာစာများမြင့်တက်နေသော်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လတ်တလော အခက်အခဲများကြောင့် အနာဂတ်ရောင်းဝယ်မှုများအပေါ်တွင်ပါ ရိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုး ရေးထွက်ကုန်များဆိုင်ရာ စီးပွားရေး အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီမှ စိုက်ပျိုးရေး သုတေသန ပညာရှင်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်တွင် ပြောင်းစေ့ ၁ အိတ်ပေါက်ဈေးမှာ Santos ဆိပ်ကမ်းအရောက်တန်ဖိုးဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၈၀.၅၀ မှ ၉၀.၀၀ ၊ Paranagua ဆိပ်ကမ်း အရောက် တန်ဖိုးမှာ ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၇၉.၀၀ မှ ၈၇.၀၀ ၊ Parana ပြည်နယ် Cascavel ဈေးကွက်တွင် ဟဲရာ ၉၃.၀၀ မှ ၉၅.၀၀ ၊ Sao Paulo ပြည်နယ် Mogiana ဈေးကွက်တွင် ဟဲရာ ၉၅ မှ ၉၇၊Campinas ဈေးကွက်တွင် ဟဲရာ ၉၈ မှ ၁၀၀၊ Rio Grande do Sul ပြည်နယ်Erechim ဈေးကွက်တွင် ဟဲရာ ၉၄ မှ ၉၆၊ Minas Gerais ပြည်နယ် Uberlandia တွင် ဟဲရာ ၈၄ မှ ၈၅ ၊Rio Verde ဈေးကွက်တွင် ဟဲရာ ၈၅ မှ ၈၆၊ Mato Grosso ပြည်နယ်ရှိ Rondonopolis ဈေးကွက်တွင် ဟဲရာ ၇၈ မှ ၈၀ အသီးသီးတို့ဖြင့် အရောင်းအဝယ်များဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ချီကာဂိုစတော့ဈေးကွက် ပဲပုတ်စေ့ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၇ နှစ်အတွင်း အကောင်းဆုံး အခြေအနေ သို့ရောက်ရှိသည့်သတင်း
၄။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဧပြီတတိတယပတ်၌ ချီကာဂိုစတော့ဈေးကွက်(Chicago Commodity Exchange –CBOT)၏ပဲပုတ်စေ့ဈေးနှုန်းများသည်အမြင့်ဈေးနှုန်းများဖြင့်ဈေးကွက်ပိတ်ခဲ့ပြီး ၇ နှစ်အတွင်း အကောင်း ဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့ပေးရမည့် ပဲပုတ်စေ့ ကြို ပွိုင့်ဈေးကွက်တွင် ယခင်ဈေးနှုန်းထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁.၂၅ ဆင့် ဈေးနှုန်းပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ပဲပုတ် စေ့ ၁ စည်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၄.၅၇ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ကုန်စည်အလိုက် ဈေးနှုန်းများတွင် ဇူလိုင်လအတွက် ပဲပုတ်စေ့ အခွံ(တိရစ္ဆာန်အစာ) ကြိုပွိုင့်ဈေးနှုန်းသည် ယခင်ဈေးနှုန်းထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၄၀ ပိုမို မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၁ တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၁၄.၇၀ ဈေးဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပဲပုတ်စေ့ဆီ ကြိုပွိုင့်ဈေးကွက်တွင် ယခင်ဈေးနှုန်းထက် ၁.၂၇ ဆင့် ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၅၅.၁၄ ဆင့်ဖြင့် လည်းကောင်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့သီးနှံဈေးကွက်သို့ ပဲပုတ်စေ့ ဝင်ရောက်မှု လျော့ကျနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားပြီး လတ်တလော သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် ဖြစ် ပေါ်နေသော ရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့် အမေရိကန်ပဲပုတ်စေ့၏ဈေးနှုန်းများ ပိုမိုမြင့်တက် စေ လျှက်ရှိသည်ဟု စီးပွားရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းအပြင် ပဲပုတ်စေ့ စိုက်ပျိုးဖြစ် ထွန်းမှုအခြေအနေများအား အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန(U.S. Department of Agriculture -USDA)က သတင်းများထုတ်ပြန်လျှက်ရှိရာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဧပြီလ (၁၈ ) ရက်ထိ ပဲပုတ်စေ့ စိုက်ပျိုးဧရိယာ၏ ၃% ကိုသာစိုက်ပျိုးပြီးစီးသည်ဟု စိုက်ပျိုးရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပို့ကုန်ဝန်ဆောင်မှု မြှင့်တင်မည့် Action Plan ထုတ်ပြန်သည့်သတင်း
၅။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ပို့ကုန် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစီမံချက်(Action Plan)တစ်ရပ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလဆန်းတွင် မဲလ်ဘုန်း မြို့၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ အဆိုပါစီမံချက်သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဩစတြေးလျ ဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတကာတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အပံ့ပေးရန်နှင့် ဩစတြေးလျ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဈေးကွက်အသစ်များရှာဖွေနိုင်ရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးထွား တိုးတက်လာစေရန်၊ အလုပ်အကိုင်များ ပိုမိုရရှိရန်နှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှ ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကိုရယူနိုင်ရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသည် ဗိသုကာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများမှသည် ကျန်းမာရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍများရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ရေရှည်အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိလျှက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းစီမံချက် သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့သို့ ဩစတြေးလျပို့ကုန်ဝန်ဆောင်မှု ချဲ့ထွင်နိုင်ရေးအတွက် အရေးပါသော ကဏ္ဍမှပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရသည် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ဩစတြေးလျဝန်ဆောင်မှု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအောင်မြင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကာ နိုင်ငံတကာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင် စွမ်းကို မြှင့်တင်သွားရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍနှင့်ပူးပေါင်း ရေးဆွဲထားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်(၈၁)ချက်အား သတ်မှတ် ဖော်ထုတ်ထားပြီး Action Plan အသေးစိတ်ကို www.services-exports.gov.auတွင် လေ့လာ ကြည့်ရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- ဩစတြေးလျနိုင်ငံ စီးပွားရေးသံမှူးပေးပို့သည့်သတင်း)
၆။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် တောင်သူများထံသို့ အစိုးရမှ အထောက် အပံ့များ ပေးအပ်မှုမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၏ ၁၀% ထက်ကျော်လွန်လျက်ရှိရာ ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) ၏ စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များတွင် ဖော်ပြပါရှိ သော သဟဇာတ ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ သက်သာခွင့် (peace clause) စကားရပ်အရ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုပေးရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံက WTO ၌ ဒုတိယအကြိမ် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ အိန္ဒိယက WTO သို့ သတင်းပေးပို့ အစီရင်ခံရာတွင် ၂၀၁၉-၂၀ ခုနှစ်၌ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ ၄၆.၀၇ ဘီလီယံရှိပြီး ယင်း လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် တောင်သူများသို့ အထောက်အပံ့ပေးအပ်မှုမှာ ဒေါ်လာ ၆.၃၁ ဘီလီယံ (ထုတ်လုပ်မှု၏ ၁၃.၇% ခန့်) ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း ပမာဏသည် WTO ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအနေဖြင့် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှု၌ ပေးအပ်နိုင်သည့်ထောက်ပံ့မှု ၁၀% ထက် ကျော်လွန်လျက်ရှိသော်လည်း ပြည်တွင်း စားနပ် ရိက္ခာဖူလုံရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အစိုးရ၏ အရန်ရိက္ခာဝယ်ယူသိုလှောင်မှု အစီအစဉ်အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယအစိုးရ၏ အဆိုပါ ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်သည် WTO ဝန်ကြီးများအဆင့် ဘာလီအစည်းအဝေး၏ စားနပ်ရိက္ခာ ဝယ်ယူသိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် မတိုင်မီကပင် တည်ရှိလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် အဆိုပါ အရန်ရိက္ခာ ဝယ်ယူထားရှိမှုမှ စီးပွားရေးအရ ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုသကဲ့သို့ ၎င်းအရန် ရိက္ခာအား ဝယ်ယူသူများသို့လည်း ပြည်ပ တင်ပို့မှု မပြုပါ ဟူသော စည်းကမ်းချက်ဖြင့် ပြည်တွင်း ဈေးကွက်၌ ရောင်းချပေးခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရ၏ အရန်ရိက္ခာ အစီအစဉ်သည် နိုင်ငံ အတွင်းရှိ ထိခိုက်လွယ်ပြီး ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသည့် လူဦးရေအတွက် ရည်ရွယ်လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ ဆန်စပါးကဏ္ဍ၌ ကန့်သတ်ထားသည့် ပမာဏထက် ကျော်လွန်၍ အိန္ဒိယ အစိုးရက တောင်သူများသို့ ပေးအပ်သည့် အထောက်အပံ့သည် သဟဇာတ ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ သက်သာခွင့် စကားရပ်အရ WTO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ တန်ပြန်အရေးယူ ဆောင်ရွက် ခြင်းမှ ကင်းလွတ်မှုရရှိရေး ခွင့်ပြုပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
၇။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်တွင်လည်း peace clause အရ သက်သာခွင့်ရရန် WTO ၌ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က အမတော်ကြေးထောက်ပံ့မှုအား သတ်မှတ် အမြင့်ဆုံး ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပေးအပ်လျက် သဟဇာတဖြစ်မှုသက်သာခွင့်တောင်းခံခြင်းမှာ ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်မှုကို ပုံပျက် ယွင်းစေကြောင်း အမေရိကန်၊ အီးယူ၊ ကနေဒါ၊ ဘရာဇီး၊ ဂျပန်နှင့် ပါရာဂွေး စသည့် နိုင်ငံများက ဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အိန္ဒိယအစိုးရကမူ ပြည်တွင်းစားနပ် ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အမျိုးသား စားနပ် ရိက္ခာ အက်ဥပဒေကို ပြဌာန်းမှုနှင့်အတူ အထောက်အပံ့ပြုသည့် အခြေခံရည်ညွှန်းဈေးနှုန်း (MSP) နှင့် ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်တို့ကို ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအစီအစဉ်များသည် တောင်သူများအတွက် အခြေခံ ရည်ညွှန်း ဈေး ခိုင်မာစွာရရှိစေရေး၊ သီးနှံများ၏ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေး၊ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ထိခိုက် လွယ်မှုရှိပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသူများ အတွက် ကောက်ပဲသီးနှံများအား သင့်တင့်သည့်နှုန်းထားဖြင့် ညီညွတ်မျှတစွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးနှင့် သဘာဝ ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များနှင့် မမျှော်မှန်းနိုင်သည့် အရေးပေါ်အခြေအနေတို့အတွက် လုံလောက်သည့် အရန်ရိက္ခာ ထားရှိနိုင်ရေးတို့ကို ရည်ရွယ် လျက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခုခံပြောဆိုခဲ့ပါ သည်။ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၌ အိန္ဒိယ ၏ သက်သာခွင့်ရရန်တောင်းဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဂျဝါဟာ လာနေရူး တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ Mr. Biswajit Dhar က Peace Clause အရ ကင်းလွတ်ခွင့် တောင်းခံမှုအပေါ် စိန်ခေါ်မှုပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ယခုကဲသို့ ပြောင်းလွယ် ပြင်လွယ်မှုရှိမှသာ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အရေး ကြီးသည့် လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုဖြစ်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများထံသို့ စားနပ်ရိက္ခာများ အခမဲ့ ထောက်ပံ့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရင်းမြစ် (နယူးဒေလီမြို့ရှိ စီးပွားရေးသံမှူးပေးပို့သည့် သတင်း)
Read more about တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ
စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
၁။ စင်ကာပူနိုင်ငံသည် အာဆီယံ ဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ် (ASEAN Trade in Services Agreement- ATISA) အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ(၅) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနက် ATISA ကို ပထမဆုံး အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးလိုက်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ထိုသို့ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သည့်အတွက် ATISA အောက်တွင်ရှိသော စင်ကာပူနိုင်ငံ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များသည် ၎င်းနေ့မှစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့်လည်း ယခုနှစ်အတွင်း အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် အာဆီယံ၏စီးပွားရေးတွင် အရေးပါမှုမြင့်တက်လာနေရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ၏ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေး (Services Trade) သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၄၄.၃ဘီလီယံ) ရှိပြီး အာဆီယံ GDP ၏ (၅၀.၆%)ကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း၊ အာဆီယံသည် အီးယူနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံပြီးလျှင် စင်ကာပူ၏ တတိယအများဆုံးဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံသို့ တင်ပို့ခဲ့သော စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ ဝန်ဆောင်မှုပို့ကုန်(Services Exports)ပမာဏသည် စင်ကာပူဒေါ်လာ (၂၇.၃ ဘီလီယံ)ရှိပြီး (၁၁.၃ %)တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုပမာဏသည် စင်ကာပူ ဝန်ဆောင်မှု ပို့ကုန်စုစုပေါင်းပမာဏ၏ (၁၀.၇%)ရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စာရင်းအရ စင်ကာပူ၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လုပ်သားဉီးရေ (၁.၈၉ သန်း) ကျော် (သို့) ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် စုစုပေါင်း၏ (၈၅%) ကျော်ရှိကြောင်း၊ ATISA အား စင်ကာပူမှ အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသည် အာဆီယံ၏ခိုင်မာသော ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်စေပြီး အာဆီယံတွင် ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာသော၊ တည်ငြိမ်မှုရှိသော၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂။ ဤသဘောတူစာချုပ်သည် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ ကောင်းမွန်လာစေရန် ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဈေးကွက်ဝင်ရောက်မှုမြင့်မားခြင်း နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် စည်းမျည်းစည်းကမ်း အတားအဆီးများ လျော့နည်းလာခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤ အကျိုးကျေးဇူးများကို မကြာမီကာလတွင် ခံစားရရှိနိုင်ရန်အတွက် အခြား အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ATISA အား အမြန်ဆုံး လက်မှတ်ရေးထိုးလာစေရေး ဆက်လက် တိုက်တွန်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- စင်ကာပူနိုင်ငံ စီးပွားရေးသံမှူးပေးပို့သည့်သတင်း)
၃။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပဲတီစိမ်း တန်ချိန် ၁ သိန်း ၅ သောင်း၊ ပဲစင်းငုံ တန်ချိန် ၄ သိန်းနှင့် မတ်ပဲ တန်ချိန် ၄ သိန်းတို့ကို တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်ပကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DGFT) က သတ်မှတ်သည့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် အညီ ပဲခွဲစက်များ၊ ပဲပြန်လည်သန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်သည်များသို့ ခွဲတမ်းချထား ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းကို အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက မတ်လအတွင်း၌ အမိန့် ကြော်ငြာစာများ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် DGFT ဌာနသည် အဆိုပါ ပဲ ၃ မျိုး တင် သွင်းခွင့် ခွဲတမ်းများ ခွဲဝေချထားနိုင်ရန်အတွက် ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ၁၅-၄-၂၀၂၁ နေ့၊ ၁၇း၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထားလျက် ၎င်းတို့ဌာန၏ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် လျှောက်လွှာများ တင်သွင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ကြရန် ၃၀-၃-၂၀၂၁ နေ့၌ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အသိပေးနှိုးဆော်စာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ နှိုးဆော်စာ၌ ပဲတင်သွင်းခွင့် လျှောက် ထားမှုကို ဝက်ဘ်ဆိုက်မှသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အီးမေးလ်များ၊ စာတိုက်ပေးပို့စာများကို လက်ခံ မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ပဲတင်သွင်း ခွင့်ခွဲတမ်းအတွက် လျှောက်ထားသူအရေအတွက်ကို ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားသဖြင့် သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ မဲနှိုက် စနစ်အပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ပြီး တင်သွင်းရမည့် ပဲတန်ချိန်ကို အညီအမျှ ခွဲဝေချထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပဲများ တင်သွင်းရမည့် ကာလမှာ ခွဲတမ်းထုတ်ပြန်ချိန်မှ ၃၁-၃-၂၀၂၂ နေ့ အထိဖြစ်ရာ တင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် ၎င်းနေ့ရက် နောက်ဆုံးထား၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆိပ်ကမ်းသို့အရောက် တင်သွင်းကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံ သတ်မှတ် ခွဲတမ်းပမာဏ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက် လျော့နည်းတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းရှင်များအား နောင်လာမည့် နှစ်များ၌ ပဲတင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ် ကြောင်း၊ ပဲတင်သွင်းခွင့် ကာလသက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားမှု များကိုလည်း လက်ခံ ဆောင်ရွက်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
၄။ မတ်လ ၂၉ ရက်နှင့် ၃၀ ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) ၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အစည်းအဝေး၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ အခွန်သက်သာခွင့်ပေးအပ်မှု အစီအစဉ် (Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme) အပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံက မေးခွန်းများထုတ်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် ၂၀၁၅-၂၀၂၀ ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒ၏ တစ်စိတ် တစ်ဒေသ အဖြစ် မိမိနိုင်ငံထွက်ပို့ကုန်များ၏ ပြည်ပဈေးကွက်၌ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအား မြှင့်တင်ရန်အတွက် အိန္ဒိယပို့ကုန်မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ် (Merchandise Exports from India Scheme - MEIS) ကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ အမေရိကန်နိုင်ငံက WTO ၌ အငြင်း ပွားမှု တင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအငြင်းပွားမှုကိစ္စအပေါ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် အိန္ဒိယ အစိုးရသည် MEIS နှင့် RoSCTL ခေါ် အထည်အလိပ်ပို့ကုန်များ အပေါ် ပေးအပ် လျက်ရှိသည့် အခွန် သက်သာခွင့် အစီအစဉ်တို့ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေါင်းစပ်လျက် RoDTEP အစီ အစဉ်အဖြစ် ၁-၁-၂၀၂၁ နေ့မှ စတင် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။အဆိုပါ RoDTEP အရ ပြည်တွင်းရှိ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် နယ်မြေဒေသအလိုက် ကောက်ခံသည့် အခကြေးငွေများ၊ ကျောက် မီးသွေးအသုံးပြုမှု ထပ်ဆောင်းအခွန်များ၊ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ခများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုအတွက် အသုံးပြုရသည့် လောင်စာဆီအပေါ် ပေးဆောင်ရသော အခွန်များ စသည့်တို့အပါအဝင် ပို့ကုန် အတွက်ပေးဆောင်ရသော သွင်းအားစုဆိုင်ရာ အခွန်အခများကို ကုန်စည်တင်ပို့ပြီးစီးချိန်၌ အစိုးရ ထံမှ ပြန်လည်ထုတ်ယူရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၅။ အိန္ဒိယ၏ RoDTEP အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ၊ အကျုံးဝင် သည့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များနှင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည့် အခွန်အခနှုန်းထားများနှင့် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေတို့ကို ရှင်းလင်းချက်ပေးရန် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) ၏ အစည်းအဝေး၌ အမေရိကန်နိုင်ငံက မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဖေဖော်ဝါရီ လအတွင်း၌ အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည့် သွင်းကုန်အပေါ် အခြေခံ အကောက်ခွန် နှုန်းထားအပြင် စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ထပ်ဆောင်း အခွန် (Agriculture Infrastructure and Development Cess) အား သီးခြားကောက်ခံမည့် အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်အတွက် ၂ မျိုးခွဲခြားကောက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည် ။အဆိုပါ WTO အစည်းအဝေး၌ အမေရိကန်နှင့် ဩစတေးလျနိုင်ငံတို့က အိန္ဒိယ၏ ဝါဂွမ်းအပေါ် သွင်းကုန်အခွန်တိုးမြှင့်မှု၊ သကြားနှင့် ဇီဝလောင်စာ (Biofuel) တို့အတွက် ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ အထောက် အပံ့များပေးအပ်မှုတို့အပေါ် ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ အလားတူ အိန္ဒိယ၏ ပဲမျိုးစုံ တင်သွင်းမှုအား အရေအတွက်အရ ကန့်သတ်ထားရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ ၃ နှစ်ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး WTO ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီ မှုမရှိကြောင်း ပြောဆိုလျက် ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ရုရှားနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့က မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
၆။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ မိသားစုတိုင်းထံသို့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အရည်အသွေးမြင့် ကောက်ပဲသီးနှံများ ‌ရောက်ရှိစားသုံးနိုင်စေရေးအတွက် ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ကို ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်ကောင်း မွန်ရန် အစိုးရက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းအစမှ ဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်ငန်းအဆုံးအထိ IT နည်းပညာများဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ခြေရာခံခြင်းကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။ အိန္ဒိယ စားသုံးသူရေးရာနှင့် စားသောက်ကုန် ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အိန္ဒိယ အရည် အသွေးကောင်စီ (Quality Council of India - QCI) အား ကောက်ပဲသီးနှံ ပြည်သူ့ဖြန့် ဖြူးရေးစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အိန္ဒိယအစိုးရက တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း၊ QCI သည် လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေ သော စံချိန်စံညွှန်းများ၏စနစ်ကို ပြန်လည်သုံးလျက် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ ခြေရာခံစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ လုပ်ငန်းအလေ့အထများအား မိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တတိယကြားခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ကောက်ပဲသီးနှံများ ဝယ်ယူမှု၊ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်ငန်းများ၌ သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း တို့ကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သီးနှံသိုလှောင်မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှု လုပ်ငန်းများတွင် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးပြု ခြင်းဖြင့် စနစ်အတွင်း ထင်သာမြင်သာရှိပြီး လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်း လျော့ချနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် Economic Times သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါသည်။
၇။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အနေဖြင့် အစိုးရ၏ ရိက္ခာ ခွဲတမ်းစနစ်မှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်၍ အာဟာရပြည့်ဝသည့် စားသောက်ကုန်များကို ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်စေရေးအတွက် စားသောက်ကုန် သွင်းအားစု ကွင်းဆက်တစ်လျောက် တောင်သူများထံမှ စားသုံးသူထံသို့ရောက်ရှိသည်အထိ လုပ်ငန်းအဆင့်တိုင်းတွင် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရန် အိန္ဒိယအစိုးရက သတ်မှတ်ထားပါသည်။နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သော အိန္ဒိယစားသောက်ကုန်ကော်ပိုရေးရှင်း (FCI) သည် မကြာသေးမီကာလကပင် အစိုးရဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်အောက်ရှိ ကောက်ပဲသီးနှံများ၏ အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်း သတ် မှတ်ချက်များအား အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။ FCI က သိပ္ပံနည်းကျ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အညီ ဂျုံ၏သိုလှောင်နိုင်မှု သက်တမ်း ကြာရှည်ခံနိုင်ရန်အတွက် ဂျုံ၌ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု လက်ရှိသတ်မှတ်ချက် ၁၄% ကို ၁၂% သို့ လျော့ချပြင်ဆင် ရန်နှင့် အခြားပြင်ပ ပစ္စည်းများ (foreign matter) ပါဝင်မှုကိုလည်း ၀.၇၅% မှ ၀.၅% သို့ ပြောင်း လဲ သတ်မှတ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင် ပြည်နယ်အစိုးရများအနေဖြင့် ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်း များ စတင်ခြင်း မပြုမီကပင် စိုက်ခင်းသုံး ပိုးသတ်ဆေးကြွင်းများ ပါဝင်မှုအခြေအနေကို စစ်ဆေး သင့်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ပိုးသတ်ဆေးများအား မဆင်မခြင်သုံးစွဲမှုကို ကြပ်မတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပိုးသတ်ဆေး ဓာတ်ကြွင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလိုအပ်သည့် စစ်ဆေးကြပ်မတ်မှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်းဖြင့် FCI က အဆိုပြုထားပါသည်။
၈။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများ ကို ကုစားရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒများ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ လွယ်ကူစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ရလဒ် ကောင်းများ ရရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၏ ၅-၄-၂၀၂၁ နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရပါသည်။အဆိုပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ ၁၀ လအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးဝင်မှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂.၁၂ ဘီလီယံရှိပြီး ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် ကာလတူထက် ၁၅% ပိုမို တိုးတက်ရရှိကြောင်း၊ ၎င်းပမာဏ အနက် အီကွီတီခေါ် အစုရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ဒေါ်လာ ၅၄.၁၈ ယီလီယံရှိပြီး ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ကာလတူထက် ၂၈% ပိုမိုလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ အစုရှယ်ယာများ ထည့်ဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ပါဝင်မှုသည် အဆိုပါပမာဏ၏ ၃၀.၂၈% ဖြင့် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏နောက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံက ၂၄.၂၈% နှင့် အာရပ် စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု တို့က ၇.၃၁% တို့ဖြင့် အသီးသီး ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထား သည်။ အဆိုပါ ၁၀ လ အတွင်း ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် အစုရှယ်ယာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ စုစုပေါင်းတွင် ၄၅.၈၁% ဖြင့် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍတို့မှာ ၁၃.၃၇% နှင့် ၇.၈၀% တို့ဖြင့် ဒုတိယနှင့် တတိယ နေရာများ၌ တည်ရှိ ခဲ့သည်။
၉။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြည်ပမှ အစုရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် ဂျပန်နိုင်ငံက ၂၉.၀၉% ဖြင့် ထိပ်ဆုံးတွင်ပါဝင်လျက်ရှိပြီး ၎င်း၏နောက်၌ စင်ကာပူနိုင်ငံက ၂၅.၄၆% နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံက ၁၂.၀၆% တို့ဖြင့် ပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ ဤတစ်လတာ အတွင်း အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ကဏ္ဍများမှာ အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှု၊ ကွန်ပြူတာနည်းပညာ ထုတ်ကုန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရသည်။
၁၀။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားကွင်းဆက်သည် COVID ကူးစက်ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် များစွားပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း နည်းပညာစင်္ကြံက ဈေးကွက်သေချာမှုကိုဖန်တီးပေးခဲ့ကြောင်း၊ COVIDရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် နိုင်ငံ အားကန့်သတ်မှုအဆင့် ၃ မှ ၅ အတွင်းသတ်မှတ်ထားခဲ့သည့်ကာလ၌ စားသောက်ဆိုင်များ ပိတ်ရ ခြင်း၊ ကျောင်းတွင်း ကျွေးမွေးမှုအစီအစဉ်များရပ်ဆိုင်းခြင်း၊လယ်သမားများ၏ လတ်ဆတ်သော ဈေးကွက်များ ပိတ်ပင်ရခြင်း နှင့်လက်လီဈေးဆိုင်များ၏ဝယ်ယူနိုင်မှုအချိန်များ လျှော့ချခြင်းတို့သည် လတ်ဆတ်သောသီးနှံနှင့် ပုပ်သိုး လွယ်သောပစ္စည်းများ၏ ဝယ်လိုအားဈေးကွက်ကို များစွာ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါကာလ အတွင်းတစ်ပိုင် တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးနိုင်သော လယ်သမားများ အနေဖြင့် ထုတ်ကုန်များပိုလျှံခြင်း၊ဝယ်ယူမည့်သူ မရရှိခြင်းနှင့်ရောင်းချရမှုမရှိသော စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များကို စုပုံဖျက်ဆီးခဲ့ရခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရသည်အထိရှိ ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်သည့် ကွင်းဆက်များကို များစွာ ထိခိုက်ခြင်းအတွေ့အကြုံများကို ခံစားခဲ့ ရကြောင်း၊တောင်အာဖရိကနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်စဉ် ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်၏ (၃၀%)၊ အလေးချိန်အားဖြင့် တန်ချိန်(၁၀)သန်းအထိ စွန့်ပစ်အဆုံးရှုံးခံနေရကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက် မှုသည် ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၏(၂%)၊ တန်ဖိုးအားဖြင့် ရန်း(၆၀)ဘီလီယံ နှစ်စဉ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း၊ COVID ဖြစ်ပွားမှုကာလအတွင်းတိုးတက်ခဲ့သော အွန်လိုင်းစင်္ကြံစီးပွားရေးသည် COVID ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအလွန်ကာလတွင် လယ်သမားများအတွက် ဈေးကွက်များ ပြန်လည် ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊Standard Bank ၏ OneFarm Share စင်္ကြံသည် လယ်သမားများ၏ ပိုလျှံနေသော စားသောက်ကုန်များကို စားသောက်ကုန်ပံ့ပိုးမှုအတွက် လိုအပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနာဂတ်ကာလတွင် OneFarm Share သည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့် အစာရေစာရှားပါးမှုနှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုကို ရေရှည် လျှော့ချနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးစင်္ကြံတစ်ခုဖြစ်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Read more about စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ
အာရှဒေသနိုင်ငံများနှင့် တောင်ဖရိကနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မတ်လအတွင်းက အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ နှုန်းထားအတိုင်းမပြောင်းလဲဘဲရှိနေကြောင်း၊ သို့သော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသူ အရေအတွက် တိုးလာသည်မှာ ၁၃ လ ဆက်တိုက်ရှိနေကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်း အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၂.၉% ရှိခဲ့ရာ ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလမှနှုန်းထားနှင့် အလားတူဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဉီးရေသည် ၃၅၀,၀၀၀ မှ ၁.၉၄ သန်းထိတိုးလာခဲ့ခြင်းမှာ တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အပြောင်းအလဲကြောင့် ပုံစံမတူသည့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတစ်ခုရှိနေခြင်းကို အဆိုပါကိန်းဂဏန်းက ညွှန်ပြနေသည်ဟု သုံးသပ်ကြကြောင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် အရေးပေါ်အခြေအနေချမှတ်လိုက်ခြင်းသည် အလုပ်သမားဈေးကွက်အပေါ် ဂယက်ရိုက်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိအခြေအနေထက် တိုးတက်လာမည့် အခြေနေမရှိကြောင်း၊ အလုပ်ခန့်ထားမှုများအပေါ် ကိုရိနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုများရှိပြီး အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်မှုသည်လည်း ကျဆင်းလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များစွာ၌ လိုအပ်သောသွင်းအားစု ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏ အရင်းအမြစ်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် အမှီပြုနေရမှုကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် အိန္ဒိယ-ဂျပန်-ဩစတြေးလျ သုံးနိုင်ငံပါဝင်သည့် Supply Chain Resilience Initiative (CSRI)ဟု ခေါ်ဆိုသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်ခိုင်မာရေး အစပြုဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်၌ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ယခုအခါ ၎င်း၏အကျိုးစီးပွားလုံခြုံမှုအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံမှ သွယ်ဝိုက်လွှမ်းမိုးမှုရှိမည်ကို စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သည့်အလျောက် အဆိုပါအစီအစဉ်၌ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို ပါဝင်ခွင့်ပြုရန် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အဆိုပြုသတ်မှတ်ချက်အား အိန္ဒိယအစိုးရက ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း၊ အိန္ဒိယဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိများ၏ပြောဆိုမှုကို ကိုးကားလျှက် Economic Times သတင်းဌာနက ဖော်ပြရာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် လတ်တလောကာလ၌ အဆိုပါ CSRI အစပြုအစီအစဉ်၌ အာဆီယံနိုင်ငံများပါဝင်ရန် လိုလားမှု မရှိကြောင်း၊ အာဆီယံအဖွဲ့မှတဆင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဩဇာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယသည် CSRI ၌ အာဆီယံအဖွဲ့ ပါဝင် ခွင့်ပြုရေးကို နောက်ပိုင်းကျမှသာ လေ့လာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကနဉီး အဆို ပြုချက်အရ အိန္ဒိယ-ဂျပန်-ဩစတြေးလျ သုံးနိုင်ငံပါဝင်သည့် CSRI အစီအစဉ်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၌ စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၌ အဆိုပါ (၃)နိုင်ငံပေါင်း၏ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉.၃ ထရီလီယံရှိပြီး ကုန်စည် ကုန်သွယ်မှုတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၇ ထရီလီယံနှင့် ဝန်ဆောင်ကုန်သွယ်မှုတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၉ ထရီလီယံရှိခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိကာလ၌ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတားအဆီးများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် အဆိုပါ(၃)နိုင်ငံသည် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုနယ်မြေများ ထူထောင်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ဆက်သွယ်မှုများကို ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ Economic Times သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ သုံးနိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှု တိုးမြှင့်ရန်အလားအလာရှိသည့် ကုန်စည်အုပ်စုများအနက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန် ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအုပ်စု(၁၀)ခုကို သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဈေးကွက်သို့စားနပ်ရိက္ခာပံ့ပိုးရောင်းချပေးနိုင်စွမ်းမှာ ယေဘူယျအားဖြင့် ကောင်းမွန်နေပြီး ကောက်နှံအရန်သိုလှောင်မှုကိုလည်း ခိုင်မာသည့်အဆင့်၌ ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ကြောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု၏ အရေးပါသောအညွှန်းကိန်းဖြစ်သည့် ကောက်နှံအသုံးပြုရန် ကုန်လက်ကျန်အချိုး (stocks-to-use ratio of grain)မှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတိပေးအမှတ်၏ အထက်တွင်ရှိနေကြောင်း၊ အဓိကအမျိုးအစားများ ဖြစ်သည့် ဆန်နှင့် ဂျုံတို့မှာ တစ်နှစ်ကျော်ဝယ်လိုအားအတွက် ပြည့်မီကြောင်း၊ မြို့ကြီးများနှင့် အလယ်အလတ်မြို့တော်များတွင် ရက်ပေါင်း(၂၀)ကျော်စာ ကုန်ချောအဆင့် ကောက်နှံနှင့် ဆီထွက်ကုန်များ ရောင်းနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီများ၏ ကုန်စည်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အရန်ကုန်စည် သိုလှောင်မှုပုံစံများ အား အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အခက်အခဲများနှင့်ကြုံလာပါက မိမိတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း၊ မြို့ကြီးများအပြင် ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုများနှင့် မြို့နေလူထုများ၏ ကောက်နှံသီးနှံသိုလှောင်နိုင်စွမ်းမှာလည်း တိုးတက်လာကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း၌ ဆောင်းဉီးရာသီ ကောက်နှံဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းများအား ချောမွေ့စွာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ရာ ပြည်နယ်အစိုးရက အနိမ့်ဆုံးဝယ်ယူရမည့်ဈေးနှုန်းအား သတ်မှတ်ပေးသဖြင့် ၎င်းပြည်နယ်မှ လယ်သမားများ၏ အကျိုးအမြတ်များအား ကာကွယ်ပေးလျှက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် နွေရာသီစိုက်ကောက်နှံများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကောက်နှံထွက်ရှိမှု၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်သာ ရှိသော်လည်း အစိုးရဌာနများက ယခုနှစ်၏ဝယ်ယူမှုများအတွက် စတင်ပြင်ဆင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ဈေးကွက် ဝယ်လိုအားအပေါ် သုတေသနပြုရန် ကွမ်တုန်းပြည်နယ်ကဲ့သို့ ကောက်နှံအများအပြားစားသုံးသည့်ဒေသများသို့ ကျွမ်းကျင်သူများအားစေလွှတ်ထားပြီး ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် လမ်းညွှန်မှုပြုရန်အတွက် ရှန်တုန်းနှင့်ဟာနန်းပြည်နယ်များအပါအဝင် အဓိကထုတ်လုပ်နေသည့်ဒေသများရှိ လုပ်ငန်းအုပ်စုများအား ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များကို စေလွှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ တိရစ္ဆာန်အစာ အတွက် ပြောင်းအသုံးပြုမှုသိသာစွာမြင့်တက်လာပြီး ဈေးနှုန်းများလည်း စံချိန်တင်မြင့်တက်လာကြောင်း၊ စားသုံးသည့် ဂျုံလိုအပ်ချက်မှာတစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် သန်း(၉၀)ခန့်ရှိပြီး ယခင်နှစ်အတွင်းက တရုတ်နိုင်ငံ မှ ဂျုံထုတ်လုပ်မှုမှာ တန်ချိန် (၁၃၄)သန်းဖြစ်ကာ ပြည်ပမှ တန်ချိန်(၈.၃၈)သန်း တင်သွင်းခဲ့ရပြီး ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သော ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် ဂျုံစိုက် ဧရိယာနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်သဖြင့် ဂျုံအထွက်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အာဆီယံသို့ e-commerce ထောက်ပို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း တည်ဆောက်မှုအား မြှင့်တင်သွားမည့်နန်နင်း
ကွမ်ရှီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ မြို့တော် နန်နင်းမြို့သည် ၎င်း၏နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်e- commerce လုပ်ငန်းအတွက် တည်ဆောက်ထားသော ဘက်စုံသရုပ်ပြဇုန်အား တရုတ်- အာဆီယံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလမ်းကြောင်းသစ်အသွင် ပြောင်းလဲသွားရန်အတွက် နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း(၂၉)ခု တည်ဆောက်ရေးအား တွန်းအားပေး၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နန်နင်းမြို့သည် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် အနီးကပ်ဆုံး တည်ရှိနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးတွင် အလေးထားသည့်e– commerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား မြှင့်တင်ရန် စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်မှုများအနက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်e– commerce အတွက် ဘက်စုံသရုပ်ပြဇုန် တည်ဆောက်ရေးလည်းပါဝင်ကြောင်း၊ ယခုအခါ နန်နင်းနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်e– commerce အတွက် ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အား စတင်ပုံဖော်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ နန်နင်း၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေး၌ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်e– commerce မှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဒေါက်တိုင် အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် နန်နင်းမြို့မှ အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းပြေးဆွဲမှုပေါင်း (၂၃)လိုင်းရှိပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဟိုချီမင်းမြို့တော်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ မနီလာမြို့တော်များနှင့် ကုန်သေတ္တာ လေယာဉ်များပြေးဆွဲလျှက်ရှိကြောင်း၊ နန်နင်းမြို့တွင် တည်ဆောက်သွားမည့် စီမံကိန်းများအနက် နန်နင်း-ဝူရှူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ပြည်တွင်းကုန်တင်လေဆိပ် ဒုတိယအဆင့် တည်ဆောက်ရေး တရုတ်-စင်ကာပူ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနေရာနှင့် အရှေ့တောင်အာရှအကြီးဆုံးe– commerce ဖြစ်သည့် Lazada ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဝန်ဆောင်မှုစင်တာကဲ့သို့သော စီမံကိန်းများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် နန်နင်းမြို့သည် အဓိက တရုတ်e– commerce ကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်ကြသည့် Alibaba ၊ JD နှင့် SF Express တို့နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးအားတည်ထောင်ထားပြီး နန်နင်းဘက်စုံ သရုပ်ပြဇုန်အတွင်း၌ ကုမ္ပဏီပေါင်း (၈၀)ကျော် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- နန်နင်းမြို့ စီးပွားရေးသံမှူးပေးပို့သည့်သတင်း)
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင်စားသုံးသူဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတွက် ဇန်နဝါရီလ တွင် ၃.၂ % ရှိရာမှ ၂.၉ % သို့နှေးကွေးလာကြောင်း၊ လစဉ်ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုသည် ဇန်နဝါရီလတွင် ၀.၃ % သာရှိရာမှဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၃.၂% သို့တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ရသည့်အကြောင်းရင်းသည် စက်သုံးဆီဈေးမြင့်တက်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အာမခံဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြင့်တက်မှုတွင် အသားများ၊ အိမ်ရာ၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ကားအသစ်များနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံဈေးနှုန်းများဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဉီးက စားသုံးသူ ဈေးနှုန်းအညွှန်းကိန်းသည် လာမည့်လများအတွင်း မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းအလုပ်သမား များ၏လစာများ ၂၂.၆% မြင့်တက်မှုနှင့် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုသည် မတ်လအတွင်း ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ရသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဧပြီလမှစတင်၍ စားသောက်ကုန်နှင့်စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွှန်းကိန်း ၅% အထိမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း၊ အဓိက ဈေးနှုန်းပိုမိုမြင့်တက်နိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများမှာ စားသောက်ကုန်၊ စက်သုံးဆီ၊ အရက်နှင့် ကားအသစ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အထဲတွင် ကျန်းမာရေးအာမခံဈေးနှုန်းသည် အိမ်အသုံးအဆောင်အသုံးစရိတ်၏ ၇.၆ % အထိအသုံးပြုနေရပြီး ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၄.၇ % အထိမြင့်တက်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ စားသောက်ကုန်များ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကောက်ပဲသီးနှံ ဝယ်ယူမှုမြင့်တက်ခြင်း၊ စားအုန်းဆီရောင်းချသူများကြောင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံများကို တိရစ္ဆာန်အစားအစာအတွက် များစွာအသုံးပြုနေခြင်းနှင့် ထိုသို့မြင့်တက်မှုကြောင့် အသားဈေးများမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်သုံးဆီဈေးနှုန်းသည်လည်း ဝယ်လိုအား မြင့်တက်မှုကြောင့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကမ္ဘာ့ရေနံစိမ်းဆီဈေးနှုန်းသည် ၁၃.၃% အထိမြင့်တက်လာကြောင်း၊ စီးပွားရေးသုတေသနဗျူရို၏ သုံးသပ်ချက်အရ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၏ စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွှန်းကိန်းမြင့်တက်မှုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၃.၉ %၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၄.၂ % နှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ၄.၄ % အထိမြင့်တက်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၏ လိမ္မော်သီးအမြင့်ဆုံးတင်ပို့နိုင်ရေး ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်သည့်သတင်း
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ လိမ္မော်သီးမျိုးစုံစိုက်ပျိုးသူများအသင်းက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လိမ္မော်သီး တင်ပို့မှုသည် ယခင်လိမ္မော်သီးရာသီက တင်ပို့မှုများကို ကျော်လွန်၍ အမြင့်ဆုံးတင်ပို့နိုင်မှုအနေဖြင့် စက္ကူ ဖာပေါင်း ၁၅၈.၇ သန်းအထိ တင်ပို့နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ ခန့်မှန်းချက်ကို ပြည့်မီအောင်တင်ပို့နိုင်ပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် တတိယမြောက် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် အများဆုံးတင်ပို့နိုင်သည့်နှစ် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စက္ကူဖာပေါင်း ၁၃၀ သန်းနှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် စက္ကူဖာ ပေါင်း ၁၄၆ သန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၂၂ % အထိ တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်နှစ်တွင် လိမ္မော်သီးနှင့်သံပုရာသီး အနည်းငယ်အထွက် တိုးတက်ခဲ့ပြီး Valencia လိမ္မော်သီး ၅% နှင့် ရှောက်ချိုသီး ၁၆ % အထိ များစွာ အထွက်တိုးခဲ့ကြောင်း၊ ရှောက်ချိုသီးအပျော့ အမျိုးအစားထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အများဆုံး စက္ကူဖာ ၃၀.၅ သန်းအထိ ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထက် ၂၉ % မြင့်တက်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ မာန်ဒရင်းအမျိုးအစား လိမ္မော်သီး အနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ၄၂ % တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း လိမ္မော်သီးအခွံပျော့အမျိုးအစားများ အဓိကထုတ်လုပ်သူများ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက Eastern Cape ပြည်နယ်တွင် မိုးခေါင်ရေရှား ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့် အနောက်ဖက်ဒေသများတွင် မိုးများခဲ့ပါက ပို့ကုန်တင်ပို့နိုင်မှုအပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုရှိသည်ဟု ထောက်ပြထားကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်လတ်သီးနှံ ခန့်မှန်းချက် (Medium-term Crop Estimate)အတွက် လိမ္မော်သီးအမျိုးအစား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် တိုးတက်နိုင်မည့်အခြေအနေရှိပြီး လာမည့်(၃)နှစ် အတွင်း တန်ချိန်ပေါင်း(၃၀၀၀၀၀) အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ အခွံပျော့လိမ္မော် သီးအမျိုးအစား၊ သံပုရာသီးနှင့် Valencia လိမ္မော်သီးများအတွက် ရောင်းချရမှုမှာ ရန်း (၆.၈)ဘီလီယံ ရှာဖွေနိုင်ပြီး လာမည့် (၃)နှစ်ကျော်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း (၂၂၂၅၀)မျိုးအထိ ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Read more about အာရှဒေသနိုင်ငံများနှင့် တောင်ဖရိကနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ
ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် အာရှဒေသနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ
ပဲပုတ်စေ့တင်ပို့ခြင်းဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ဒုတိယပတ်အား စတင်ခဲ့သည့်သတင်း
ပြည်တွင်းရှိ ဆီထွက်သီးနှံများအနက် ပဲပုတ်စေ့ဈေးကွက်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ မတ်လ၏ ပထမ(၂)ပတ်တာကာလအတွင်း သတင်းကောင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် လက်ရှိကာလတွင် ပဲပုတ်တန်ချိန် (၅.၁၃၆)သန်း တင်ပို့ထားပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ကာလတူ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄ % တိုးတက်တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့တင်ပို့ခဲ့သည့်ပမာဏသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လအတွင်း တင်ပို့ခဲ့သည့်ပဲပုတ်တန်ချိန် (၁၀.၈၅)သန်း၏ ထက်ဝက်နီးပါးရှိကြောင်း၊ ရိတ်သိမ်းမှု များတိုးတက်လာခဲ့ပြီးနောက် ပြည်ပတင်ပို့မှုများပုံမှန်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ မတ်လ လယ်တွင် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ပဲပုတ်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဈေးနှုန်း ညွှန်းကိန်းသည် (၃.၃၁ %)သို့ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဘရာဇီးလျားပြည်ထောင်စုနယ်မြေတွင် ပဲပုတ်စေ့ တစ် အိတ်လျှင် ဘရာဇီးလ်ဟဲရာ ၁၅၆ ဖြင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ပြည်နယ်ဈေးကွက်တွင် ပဲပုတ်စေ့တစ်အိတ်လျှင် ဟဲရာ ၁၆၈ အထိ ဈေးပေါက်ခဲ့ပြီး ၁.၂၀ % ပိုမို တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၊ မတ်လလယ်တွင် နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာတန်ဖိုးသည် ၁.၄၄ % မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်နှင့် ချီကာဂိုစတော့ဈေးကွက်တွင် ဆီထွက်သီးနှံဈေးနှုန်းများ အတက်ဘက်သို့ ဉီးတည်နေရာ ပဲပုတ်စိုက်တောင်သူများအနေဖြင့် စာချုပ်ဖြင့် ကြိုတင်ရောင်းချထားသောပမာဏ ကိုသာတင်ပို့လိုပြီး ရောင်းဝယ်မှုအသစ်ပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒမရှိကြသကဲ့သို့ ပြည်တွင်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် သူများအနေဖြင့်လည်း ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များအတိုင်း လိုက်နာတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် သီးနှံ ရိတ်သိမ်းမှုများတွင် မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းနေမှုများကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြကြောင်း၊ ဆီထွက် သီးနှံများတွင် ရိတ်သိမ်းချိန်နောက်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော်လည်း ဧပြီလတွင် တင်ပို့နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ပဲပုတ်ဈေးကွက်များ ပိုမိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ကြိုတင် ရောင်းချထားသည့် ပို့ကုန်များအတွက် ဆက်လက်တင်ပို့နိုင်ရေး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မတ်လထိစာရင်းများအရ ပဲပုတ်စေ့ တန်ချိန် (၁၀)သန်းကျော်အား တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်သဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကာလတူတွင် တင်ပို့ခဲ့သည့် ပဲပုတ်စေ့တန်ချိန် (၁၁.၆) သန်းအောက် လျော့နည်းလျှက် ရှိကြောင်း၊ တင်ပို့ခဲ့သည့်ပမာဏအနက် ပဲပုတ်စေ့တန်ချိန် (၈)သန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ချီကာဂိုစတော့အိတ်ချိန်းဈေးကွက်တွင် ဆီထွက်သီးနှံများ၏ ဈေးနှုန်းများ မှာ အတက်ဖက်သို့ ဉီးတည်နေပြီး ကုန်သွယ်မှုညွှန်းကိန်းများသည် (၀.၂၅) အမှတ်မှ (၇.၇၅) အမှတ် သို့ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်နှစ်ကာလအတွင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဈေးနှုန်းများမှာ မေလအတွင်း ပဲပုတ်စေ့တစ်စည်လျှင် (၁၄.၁၉)ဒေါ်လာနှင့် စက်တင်ဘာလတွင် (၁၂.၈၉) ဒေါ်လာ တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ USDA ကဝယ်ယူခဲ့သည့် ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ပဲပုတ် ဈေးနှုန်း များဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ တောင်အမေရိကတိုက်ရှိနိုင်ငံများအနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရာသီဥတုများ အပေါ်တွင် သတိထားဆောင်ရွက်နေရာ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ သီးနှံ စိုက်ပျိုးရာသီအတွက် ဆီထွက်သီးနှံများ စတင်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေရသည့်အချိန်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရာတွင် ပြောင်းနှင့် ပဲပုတ်စေ့ကုန်ကြမ်းအသုံးပြုမှု တရုတ်လျှော့ချသည့် သတင်း
တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရာတွင် ပြောင်းနှင့်ပဲပုတ်စေ့ကုန်ကြမ်းအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချနိုင် ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ဉီးဆောင်လှုံ့ဆော်လျှက်ရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ လှုံ့ဆော်မှုသည် ကမ္ဘာ့ကောက်ပဲသီးနှံကုန်သွယ်မှုအပေါ်တွင် ကြီးမားသောဆိုးကျိုးများ ရိုက် ခတ်နိုင်ကြောင်း၊ တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ သို့ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ပေးပို့သောအကြောင်းကြားစာတွင် ပြောင်းနှင့်ပဲပုတ်စေ့ နေရာ တွင် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မည့် အခြားသီးနှံများနှင့်ပတ်သက်သော လမ်းညွှန်လက်စွဲစာစောင်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ မတ်လကုန်တွင် အစာအဟာရဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများက စတင်ရေးသားပြုစုမည့် အစီအစဉ်ကိုဖော်ပြထားကြောင်း၊ အဆိုပါသဘောထားမှတ်ချက်များအပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ရေးရာဝန်ကြီးက တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့်မလုံလောက်သဖြင့် တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှုတွင် ပြောင်းနှင့်ပဲပုတ်ကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းများ စံချိန်တင်မြင့်တက်လာမှုကြောင့် အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သည့်စာကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြောင်း ဒုတိယအများဆုံးသုံးစွဲသည့် နိုင်ငံအဖြစ်မှ ပြောင်းတင်သွင်းမှု ပိုမိုခုန်တက်သွားနိုင်ကြောင်း၊ အကောက်ခွန်စာရင်းများအရ တရုတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြောင်းတန်ချိန်(၄.၈) သန်း တင်သွင်းခဲ့ရာ ယခင် နှစ် ကာလတူထက် ၄၀၀ % ပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ဂျုံနှင့်နှံစားပြောင်း တင်သွင်းမှုမှာလည်း တိုးတက် လျှက်ရှိနေကြောင်း၊ တရုတ်အစိုးရ၏ အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအပေါ် အလေးထားချမှတ်လုပ် ဆောင်နေချိန်တွင် ပြောင်းနှင့်ပဲပုတ်စေ့လျှော့ချသုံးစွဲရေးလှုံ့ဆော်မှုထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူ သွင်းကုန်တင်သွင်းမှုနှင့် သွင်းကုန်ဈေးကွက်များ ခိုင်မာတည်ငြိမ်ရေးအပေါ်တွင် စိုးရိမ်စိတ်များမြင့်တက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ပြောင်းနှင့်ပဲပုတ်စေ့ လျှော့ချသုံးစွဲရေးနှင့်သီးနှံအစားထိုး၍ တိရစ္ဆာန်အစာ ထုတ်လုပ်ရေးအစီအစဉ်များကြောင့် ရိုက်ခတ် လာနိုင်မည့်ဆိုးကျိုးများကိုမခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်း၊ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အခက်အခဲများစွာရှိကြောင်း၊ အခြားပရိုတိန်းကြွယ်ဝသည့်သီးနှံဖြစ်သော နေကြာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုသည် ပဲပုတ်စေ့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်ပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်နည်းပါးကြောင်း၊ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပဲပုတ်စေ့အပတ်စဉ်တင်ပို့မှုမှာလည်း တန်ချိန် ၂ သန်းကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပဲပုတ်စေ့ ကိုသာ အများဆုံးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှုအတွက် သီးနှံ ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်နှင့် စိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့်ပမာဏ မျှတစေလိုကြောင်း၊ ဆန်ကို ကုန်ကြမ်းသီးနှံ အဖြစ် အသုံးပြုမှုတိုးမြှင့်လိုပြီး ပြောင်းနှင့်ပဲပုတ်စေ့အသုံးပြုခြင်းအစား ဂျုံနှင့်အခြားသီးနှံများကို အစားထိုးအသုံးပြုစေလိုကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွက် စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက်စစ်တမ်းအရ ဂျပန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအခြေအနေ အနှုတ်သဘောဆောင်နိုင်သည့်သတင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လထိ ကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် စစ်တမ်းအရ အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံး၏ စီးပွားရေးအခြေအနေပြအညွှန်းကိန်းသည် အနှုတ်(၄.၅)ဖြစ်ကြောင်း၊၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အညွှန်းကိန်း အနှုတ်ပြနေခြင်းသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုများ ဆက်လက်ပြန့်ပွားနေမှုကြောင့် အရေးပေါ် ကြေငြာချက် ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ရခြင်း၊ တည်းခိုနေထိုင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းများ စသည့်ဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေသည် ကျဆင်းနေခြင်းတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို ဆက်တိုက်ထိခိုက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအရ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်သောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အညွှန်းကိန်းမှာ အနှုတ်(၇.၄)ဖြစ်နေကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပြင် Tele Work အသုံးပြုခြင်း၊ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များနှင့် အပန်းဖြေခရီးသွားလာခြင်းတို့ကိုရှောင်ရှားရခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ထိခိုက်လာခဲ့ကြောင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့သော အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်၍ အဆိုပါကဏ္ဍ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းသည် အပေါင်း(၁.၆) ဖြစ်နေကြောင်း၊ အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းသည် အနှုတ်(၃၁.၄)ဖြစ်နေ၍ ယခင်စစ်တမ်းဖြစ်သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိကာလထက် ပိုမိုကျဆင်းလာခဲ့ကြောင်း၊ အနာဂတ်တွင် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှဇွန်လအတွင်း အပေါင်း (၂.၅)၊ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း အပေါင်း(၇.၁)အထိပြန်လည်တိုးတက်လာနိုင်မည်ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင်များက မျှော်လင့်ကြကြောင်း၊ အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်သဘောထားသည် တိုးတက်မှု ရှိနိုင်သော်လည်း ဇွန်လမှစက်တင်ဘာလအထိကာလတွင် အနှုတ်(၄.၁)သို့ ဆက်လက်ကျဆင်း နေမည့်အခြေအနေဟုသုံးသပ်ထားကြောင်း၊ စီးပွားရေးအခြေအနေပြအညွှန်းကိန်းသည် ကုမ္ပဏီများ၏ လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (၇.၁%)၊ သာမာန်ဝင်ငွေသည်(၂၀.၃%)၊ အဆောက်အဉီရင်းနှီးမှုသည် (၉.၂%)စသဖြင့် အသီးသီးကျဆင်းလာနိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခကို တစ်နာရီပျမ်းမျှ ယန်း ၁၀၀၀ ရရှိစေရန် ရည်မှန်းထားသည့်သတင်း
ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၂)ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး၌ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ တိုးမြှင့်ရေးဆောင်ရွက်ရန်၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပုံမှန်လုပ်သားမဟုတ်သောလုပ်သားများအကျိုးအတွက် ပြန်လည်ကုစားပေးနိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ပျမ်းမျှ ယန်း ၁၀၀၀ ရရှိစေရေး အလျင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နွေရာသီတွင် ဆောင်ရွက်မည့် မူဝါဒရေးဆွဲမည့် အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုကြောင့် အကျပ်အတည်းရင်ဆိုင်နေရသည့် ဂျပန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေရန်နှင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြီးများ၏ လူသားအရင်းအမြစ်များကို ဒေသန္တရစီရင်စုများရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသို့ ဖြန့်ကျက်စေလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေများမှ တဆင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီတို့မှ လူဉီးရေတစ်သောင်းခန့်ကို အမြန်ဆုံး စာရင်းပြုစုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားအရင်းအမြစ်များကို ဒေသန္တရအစိုးရထံပေးပို့ခြင်းနှင့် ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စသည့်စနစ်များကိုလည်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဩစတြေးလျအစိုးရက ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် အကူအညီများထပ်မံပေးအပ်မည့် သတင်း
ဩစတေးလျနိုင်ငံတွင် အသေးစားခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအား ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် အစိုးရက ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် လျှော့ဈေး အားလပ်ရက်လေကြောင်းခရီးစဉ်(၈၀၀၀၀၀) အတွက် ခရီးသည်အသစ်များရရှိစေရန် အစိုးရက ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား (၁၂) သန်း ထပ်မံပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ဒေသ(၅၇)ခုမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (၁၈၀၀) ကျော် ကို ဓါတ်ပုံအသစ်များနှင့် ဗီဒီယိုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် ဒေါ်လာ(၁၂) သန်းကို ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဒေသခံခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍမှ သက်ဆိုင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးက ဩစတြေးလျလူမျိုးများအနေဖြင့် မျိုးချစ်စိတ် တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ပိတ်ရက်များတွင် ကြိုတင်စာရင်းပေးစေလိုသည့်အကြောင်းမှာ တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းရှိခရီးသွားနေရာများနှင့် ဈေးနှုန်းထက်ဝက်သက်သာမည့် လေကြောင်းခရီးစဉ်(၈၀၀၀၀၀)ကို စီစဉ်ပေးထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၌ ပိတ်ရက်တစ်ရက်တွင် သုံးစွဲလိုက်သည့် တစ်ဒေါ်လာသည် ခရီးသွား အလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုခြင်းဖြစ်ရာ အားလပ်ရက်များတွင် ပြည်သူများသည် ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းကာ တည်းခိုခန်းများတွင် တည်းခိုနေထိုင်ခြင်း၊ စားသောက်ဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူစားသုံးခြင်း နှင့် ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများ ရယူရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ Cairns သည် အကောင်းဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံအချို့၏တည်နေရာဖြစ်ကာ အစိုးရအနေဖြင့် ဩစတြေးလျတိုက်တစ်ခွင်လုံးမှ Cairns သို့ပြေးဆွဲမည့်လေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက် ဈေးသက်သာသည့် လက်မှတ်ခနှုန်းထားများကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် ယခုအချိန်သည် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ရန် သင့်တော်သော အချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဩစတြေးလျ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ရေး ပထမတန်း ခရီးသွား ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်နေရာအဖြစ် Cairns အား ရောင်းပန်းလှစေမည့် အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက် ဒေသခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
မုယောစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် WTO လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းသတင်း
ဩစတြေးလျနိုင်ငံက တင်သွင်းသောမုယောစပါးအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံက တန်ပြန်စုပုံတင်သွင်း ခွန်ကောက်ခံသည့်ကိစ္စရပ်ကို ဖြေရှင်းရန် နောက်တဆင့်အနေဖြင့် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးခုံရုံး တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရန် WTO သို့ တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးက WTO ၏ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား နိုင်ငံအချင်းချင်းလေးစားသမှုဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြား အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများရှိခဲ့သော်လည်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်က ဩစတြေးလျနိုင်ငံသည် အခြားကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများက ချမှတ်ကျင့်သုံးသည့်အစီအမံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံအစိုးရသည် ၎င်းနိုင်ငံ၏ မုယောစပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ များအားအကာအကွယ်ပေးရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ မုယောစပါးကုန်သွယ်မှုမှာ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ် ကြိုးပမ်းမှုကို ကိုယ်စားပြုလျှက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံက ဩစတြေးလျမုယောစပါးအပေါ် တန်ပြန်စုပုံတင်သွင်း ခွန်ကောက်ခံခြင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ WTO ဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ဝတ္တရားများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဟုဩစတြေးလျကထောက်ပြပြောဆိုထားကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသည် WTO ၏ အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည့် နိုင်ငံစုံ စည်းမျဉ်းအခြေခံ ကုန်သွယ်မှုစနစ်ကို ခိုင်မာစွာထောက်ခံသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ဩစတြေးလျပို့ကုန် တင်ပို့သူများ၏ အခွင့်အရေးများ ရပ်တည်နိုင်ရန် ၎င်းကုန်သွယ်မှုစနစ်နှင့်အညီ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားမှုအရှိန်မြင့်လာချိန်မှစ၍ စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးအတွက် ဩစတြေးလျကုန်သွယ်မှုပမာဏတန်ဖိုးသည် (၄၀%)ခန့် ကျဆင်းခဲ့သည်ဟု ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးနှင့်ကုန်သွယ်မှုဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ အကြားကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးမှာ ယေဘူယျအားဖြင့် ၂ % ခန့်သာ ကျဆင်းပြီး သံရိုင်းလိုအပ်ချက်မှာ မြင့်မားဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအတွင်း အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်ကုန်သွယ်မှုမှာ(၂၂ %)ခန့်ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် ပုဇွန်ထုပ်နှင့် ချည်များအပါအဝင် ဩစတြေးလျဝိုင်၊ မုယောစပါးတို့အပေါ် အကောက်ခွန်နှုန်းများတိုးမြှင့်ကောက်ခံလျှက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံက အပူနှင့်ကျောက်မီးသွေးအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်ပြီးနောက် ကျောက်မီးသွေးသင်္ဘောအစင်း(၄၀)ခန့်သည် တရုတ်နိုင်ငံဆိပ်ကမ်းများတွင် သောင်တင်လျှက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လမှ ဇန်နဝါရီလထိ(၆)လတာ ကာလအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ အပူကျောက်မီးသွေးတင်ပို့မှု(၇၀ %) ကျဆင်းခဲ့ပြီး သတ္ထုကျောက်မီး သွေးတင်ပို့မှုမှာ(၆၀%) ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း အိန္ဒိယနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှ ကျောက်မီးသွေးလိုအပ်ချက်များကြောင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏တင်ပို့မှုမှာ (၈%) သာကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ မုယောစပါးကို အခြားနိုင်ငံများသို့ ပြောင်းလဲတင်ပို့မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံက မုယောစပါးအပေါ် တန်ပြန်စုပုံတင်သွင်းခွန် ကောက်ခံမှုအား လျစ်လျူရှုနိုင်သော်လည်း ဝိုင်တင်ပို့မှုမှာ များစွာထိခိုက်နစ်နာလျှက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ဝိုင်တင်ပို့မှုမှာ ဒေါ်လာသန်းချီ၍ ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ အောက်တိုဘာလအတွင်းက တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဒေါ်လာ ၁၆၄ သန်းရှိ ဝိုင်များတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ဝိုင်မှာ မုယောစပါးကဲ့သို့ အခြားခိုင်မာသည့် ဈေးကွက်မရရှိသေးသည့်အတွက် ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘုတ်အဖွဲ့မှ ၂၆.၃.၂၀၂၁ နေ့ရက်စွဲဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် (၁၆.၄%)မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဤသို့ ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်ခဲ့သည့်အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ဆီမီးကွန်ဒက်တာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ် ဝယ်လိုအားမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် (၄)လဆက်တိုက် တိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေများမှာ 5G နှင့် Cloud နည်းပညာတို့ကို အသုံးပြုမှု တိုးတက်လာသဖြင့် ဆီမီးကွန်ဒက်တာဝယ်လိုအားမြင့်တက်ခဲ့ပြီး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍသည် ၃၀.၃% ဖြင့် တိုးတက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအား တင်ပို့မှုမြင့်တက်ခဲ့သည့်အတွက် ဇီဝဆေးဝါးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် (၂၃.၉%)အထိ တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ပင် အနုစိတ်အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် (၁၅%)နှင့် ဓါတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် (၂.၅%) တိုးတက်မှုရရှိခဲ့သော်လည်း အထွေထွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနှင့် သယ်ပို့အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတို့တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ် (RCEP)အား၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစ၍ အသက်ဝင်လာစေရန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဆန္ဒရှိနေသည့်သတင်း
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် RCEP သဘောတူစာချုပ်အား ဆောလျင်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် တိုက်တွန်းလျှက်ရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည်လည်း RCEP ကို ၁.၁.၂၀၂၂ နေ့မှစတင်၍ အာဏာသက်ဝင်လာစေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တရုတ်အစိုးရ၏ အပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးမှုနှင့် စာချုပ်၏အရေးကြီးမှုကိုပြသနိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံသည် RCEP အား အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွင် ဉီးဆောင်ထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ အာရှနှင့်ပစိဖိတ် ဒေသတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏လွှမ်းမိုးမှုကြီးထွားလာသည့်အခြေအနေအပေါ် တန်ပြန်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသည် RCEP အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ထောက်ခံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် RCEP ၏ တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့် ၎င်း၏ပြိုင်ဖက်အမေရိကန်နိုင်ငံ က ပစိဖိတ်ဖြတ်ကျော်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ်(TPP)မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သော အခြေအနေတို့မှာ RCEP အလျင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ အပေါ် တွန်းအားများဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ RCEP သဘောတူစာချုပ် အာဏာသက်ဝင်လာစေရန်မှာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ(၆)နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမဟုတ်သော ကျန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၃) နိုင်ငံတို့မှ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Read more about ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် အာရှဒေသနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ
ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အာရှဒေသ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းများ
ပီလောပီနံပျိုးပင် လက်တွေ့စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှုကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သော အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများအသုံးပြု၍ မျိုးပွားမှုနည်းစနစ်အဆင့်ဆင့်အား ဖန်လုံအိမ်အတွင်း သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တောင်သူလယ်သမားများကိုယ်တိုင် အပင်၏ ရိုးတံကိုအသုံးပြု၍ မျိုးပွားခြင်းအစား အရွက်ဖူးကိုအသုံးပြု၍ မျိုးထုတ်ယူသောနည်းစနစ်ကြောင့် ရိုးရာစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကို ၁၀ အထိ တိုးတက်စေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပီလောပီနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် တောင်သူများ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသည့် ပျိုးပင်ရှားပါးမှုအခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရန်ရည်ရွယ်၍ မျိုးပွားသည့်နည်း စနစ်အသစ်ကို ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရှိ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနကုမ္ပဏီ (Brazillian Agricultural Research Company- Embrapa) က စမ်းသပ်သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပီလောပီနံ အရွက်များတွင် အပင်သစ်မျိုးပွားနိုင်သည့်အရွက်ဖူးများရှိရာ ရိုးတံတစ်ခုတွင် မျိုးပွားနိုင်သည့် အရွက်ဖူး ၃၀ နှင့် ၄၀ ကြား ပါရှိပြီး တစ်နှစ်တာကာလတွင် ရာသီစက်ဝန်း ၄ ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်သဖြင့် ရိုးတံတစ်ချောင်းမှ အပင်ပေါက် ၁၆၀ ထိရရှိနိုင်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် လယ်သမားတိုင်းနည်းပညာများရရှိစေရေးအတွက် မျိုးပွားသည့်နည်းစနစ်အသစ်ကို ရိုးရှင်း လွယ်ကူအောင်လုပ်ဆောင်ထားကြောင်း၊ အပင်ဖျက်ပိုးမွှား ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အပင်ပိုးမွှား လေ့လာရေးစီမံကိန်းများလုပ်ဆောင်နေသည့် ပိုးသတ်ဆေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီး ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန်မျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ အရွက်ဖူးကိုအသုံးပြု၍ ပျိုးပင်ဖောက်ရာတွင် ၈၀% ကျော် အောင်မြင်မှုရရှိကြောင်း၊ ပျိုးခြံအဆောက်အအုံ၏ အနည်းဆုံး ရှိရမည့် အကျယ်အဝန်းနှင့်စိုထိုင်းဆ အခြေအနေသည် အပင်အညှောက်ဖောက်စ ပထမရက်သတ္တပတ် အချိန်တွင်အရေးကြီးကြောင်း၊ မျိုးပွားမှု တီထွင်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပီလောပီနံ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အကျိုးများသည်ဖြစ်ရာ မျိုးပွားခြင်းအား လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ပျိုးခြံများတည်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့် အချိန်တိုအတွင်းမျိုးအမြောက်အများထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပီလောပီနံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချနိုင်ခြင်း သာမက အချိန်ကြန့်ကြာမှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အာရှဒေသ၌ လက်လီရောင်းချမှုတိုးတက်မှုမှာ မောင်းနှင်အားအဖြစ် လွန်ခဲ့သောဆယ်စု နှစ်ကတည်းကဉီးဆောင်လျှက်ရှိပြီး ယခုအခါ ကမ္ဘာ့ e-commerce ရောင်းချမှု၏ ၅၀% ကျော် ရှိကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်–19 ကြောင့် e-commerce လုပ်ငန်း အရှိန်မြင့်မားလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်ယူမှုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ (၅၈%)၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ (၄၇%)၊ ဟောင်ကောင်ဒေသ၌(၄၆%) အသီးသီးမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ e-commerce တိုးတက်လာမှုကြောင့် စားသုံးသူများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် လက်လီရောင်းချသူများအကြား ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်လာကြောင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ဖြင့် အဓိက လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Alibaba Group Holdings၊ JD.com နှင့် Pinduoduo တို့၏ စားသောက်ကုန်လက်လီရောင်းချမှု ကွင်းဆက်မှာ ထိပ်ပိုင်းနေရာသို့ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ Shopee နှင့် Lazada တို့မှ Livestream ဖြင့် လက်လီရောင်းချမှုများမှာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၌ အဓိကကျလာပြီး စားသုံးသူများ၏ ယုံကြည်မှုများနှင့်သစ္စာရှိမှုများမှာလည်း ပိုမိုအားကောင်းလာသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း၊ နိုင်ငံ အလိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအထားကြောင့် နယ်စပ်ဒေသများတစ်လျှောက်တွင် အမျိုးမျိုးသောပြောင်းလဲမှုများရှိနိုင်ကြောင်း၊ စားသုံးသူများကြိုက်နှစ်သက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ လက်လီရောင်းချမှုမြင့်တက်လာမှုမှာ e-commerce လုပ်ငန်းကြောင့် ဖြစ်လာပြီး အပြည့်အဝ ယုံကြည်မှုရှိခြင်းမှာ အနာဂတ်တွင် အရေးပါလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်လာမည့် နှစ်(၂၀) တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မတူညီသောအခြေအနေများဖြစ်လာနိုင်ပြီး အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းသည့်ပုံစံများလည်း ကွဲပြားခြားနားနိုင်ကြောင်း၊ အနာဂတ်တွင်လက်လီရောင်းချမှု၌ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပထမအချက်တွင် လက်လီရောင်းချသူတစ်ဉီး၌ ပလက် ဖောင်းကိုအသုံးပြု၍ စားသုံးသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေမည့် များစွာသော လက်လီပြန်လည် ရောင်းချသူများ ရှိနေမည်ဖြစ်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု စီမံခန့်ခွဲရန်မှာပိုမိုခက်ခဲလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယအချက်တွင် လက်တွေ့နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု များနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်ရပြီး စားသုံးသူများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မော်တာများ လက်လီရောင်းချသူများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက်ခံနိုင်ရန် စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်ကြောင်း၊ တတိယအချက် အနေဖြင့် ပြင်ပ၌ရောင်းချသည့် စတိုးဆိုင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပြန်လည်သတ်မှတ်လာနိုင်ကြောင်း၊ ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ဆိုင်များသို့သွားရောက်လျှင် လက်လီ ရောင်းချသူမှ ၎င်းတို့၏ဆိုင်များ၌ ပိုမိုဝယ်ယူစေလိုပါက (သို့)ဝယ်ယူသူအသစ်များ ခေါ်ဆောင် လိုပါက ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပစ္စည်းများကို ဓါတ်ပုံများ ရွေးချယ်စေကာ ယုံကြည်မှုဖြင့်လုပ်ကိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စတုတ္ထအချက်မှာ အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းအသစ်များ၊ လက်လီရောင်းချသူအသစ်များနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်များဖြင့် ဈေးကွက်များ အမျိုးမျိုးကွဲပြားလာမည်ဖြစ်ရာ ဈေးနှုန်းများနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှုလုပ်ကိုင်သူ များလည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးအချက်မှာ လွယ်ကူအဆင်ပြေမှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုမြန်နှုန်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ အာရှဒေသ၌ e-commerce စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းအဆင့် အဆုံးသတ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အီးယူ၏လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ အသစ်အရ ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှုကို များစွာလျှော့ချရမည်ဖြစ်ရာ အီးယူ၏လယ်သမားအများစု (အထူးသဖြင့် ဝိုင်စပျစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများ)အပေါ် သိသာစွာရိုက်ခတ်မှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဉရောပကော်မရှင်က အဆိုပြုခဲ့သည့် “စိုက်ခင်းမှသည်စားပွဲဆီသို့” (Farm to Fork Strategy)မဟာဗျူဟာ၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များအနက် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် ပိုး သတ်ဆေးအသုံးပြုမှုကို ထက်ဝက်လျှော့ချနိုင်ရေးဆိုသည့်အချက်ကို အကောင်အထည် ဖော် ခြင်းသည် ပိုးသတ်ဆေးအများအပြားအသုံးပြုမှုအပေါ် မှီတည်နေရသည့်သီးနှံများအတွက် အရေးပါသော သက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပြီး ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စပျစ်စိုက်ပျိုးမှုလုပ်ငန်းသည် ပိုးသတ်ဆေးများစွာအသုံးပြုရသဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အီးယူနိုင်ငံများတွင် မှိုသတ်ဆေးများအသုံးပြုမှု စုစုပေါင်း၏ (၇၀%)ကျော်ကို စပျစ်စိုက်ခင်းများအတွက် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရိုးရာနည်းလမ်းအရ ဝိုင်စပျစ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုသည် ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှုအပေါ် များစွာမှီခိုနေရပြီး အီးယူ၏ မဟာဗျူဟာအသစ်အရ ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှုလျှော့ချခြင်းကြောင့် ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၏ ဝိုင်စပျစ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအပေါ် ကြီးမားသောသက်ရောက်မှု ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ဒေသမျိုးရင်း စပျစ်မျိုးစိတ်များ၏အနာဂတ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ဒေသစပျစ်မျိုးစိတ်များကို ရေရှည်တည်တံ့သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနည်လမ်းဖြင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်း အီးယူ၏ Farm to Fork Strategy မှ မျှော်မှန်းသည့် ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှုလျှော့ချရေးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိရန်အတွက် လုံလောက်သည့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း မရှိသေးသဖြင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချခြင်းဆီသို့သာ ဉီးတည်စေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြောင်း၊ စပျစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၌ ကာလ ကြာရှည်စွာ ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုမှု အစဉ်အလာရှိခဲ့သည့်အခြေအနေတွင် အီးယူမဟာဗျူဟာ နှင့်အညီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားရေးနှစ်ရပ်လုံးကို မထိခိုက်စေရေးအတွက် ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုမှုကို မည်သည့်အဆင့်ထ ိလျှော့ချရမည်ဆိုသည်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာနေကြောင်း၊ နည်းလမ်းများစွာကို ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကာလရှည်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ် နိုင်သည့် အဖြေကို ရနိုင်ကြောင်း၊ ရိုးရာနည်းလမ်းအတိုင်းအသုံးပြုနေသည့် ပိုးသတ်ဆေးများကို ဘဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်စေသည့် ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် အစားထိုးအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်း ရှိသော်လည်း ယင်းမှာထိရောက်မှုနည်းကြောင်း၊ ထို့အပြင် ကြေးနီအခြေပြုပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါက စိုက်ပျိုးမြေပေါ်၌ သတ္တုများ စုပြုံလာနိုင်သည့်ပြဿနာလည်းရှိကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော နည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်း မရှိဘဲ ရိုးရာစိုက်ပျိုးသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ပင် ခံနိုင်အားကောင်းသော စပျစ်မျိုးစိတ်များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ အနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စပျစ်တန်ချိန်(83000)ဝိုင် (၅၂၅၀၀၀) ဟက်တိုလီတာ ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး သစ်သီးဝလံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ ဝိုင်စပျစ်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်မှုသည် (၂ -၃ %)ခန့်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၌ စပျစ်စိုက်ပျိုးမြေ(၁၈၆၀၀)ဟက်တာခန့် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း၊ အီးယူ၌ စပျစ်စိုက်ပျိုးမြေ ဟက်တာ(၃.၂)သန်းခန့်ရှိသည့်အနက် စပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီတို့သည် (၇၄%)ကို ကိုယ်စား ပြုကြောင်း၊ အီးယူရှိစပျစ်စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာသည် ကမ္ဘာ့စိုက်ပျိုးမှုဧရိယာ၏ (၄၅%)ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဉရောပသမဂ္ဂသို့ အင်းဆက်အခြေပြု စားသောက်ကုန်များတင်ပို့ခွင့်ရရှိသည့်သတင်း
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဉရောပသမဂ္ဂသို့ အင်းဆက်အခြေပြု စားသောက်ကုန်များ (Insect base food)ကို တင်ပို့ခွင့်ရရှိခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအနက် (၅)နိုင်ငံမြောက်နိုင်ငံ ဖြစ်လာပြီး ဥရောပကော်မရှင်၏ Regulation (EU)2021/171 အရ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လုံလောက်သည့် အထောက်အထားနှင့်အာမခံချက်များ ပြသနိုင်မှုကြောင့် ဥရောပကော်မရှင် ကျန်းမာရေးနှင့်အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဌာန၏အီးယူဈေးကွက်သို့ အင်းဆက်အခြေပြု စားသောက်ကုန်များ တင်ပို့ခွင့်ရရှိသည့် တတိယနိုင်ငံများစာရင်းတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအား ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဥရောပကော်မရှင်၏ ယင်း Regulation သည် ၁၅.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က အင်းဆက်အခြေပြုစားသောက်ကုန်များ တင်ပို့ခွင့် ရရှိထားသည့်နိုင်ငံများမှာ ကနေဒါ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ စားသောက်ကုန်ကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် မောင်းနှင်အား အသစ် တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း၊ အီးယူ၌ အင်းဆက်အခြေပြုစားသောက်ကုန်များကို ဝယ်ယူစားသုံးသူများသည် စားသောက်မှုပုံစံအသစ်ကို ရှာဖွေလာကြခြင်းဖြစ်သဖြင့် ၎င်း ထုတ်ကုန်များကို ပုံမှန်စားသုံးမှု အလေ့အထအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လူဉီးရေ(၂.၅)ဘီလီယံခန့်က အင်းဆက်များကို စားသုံးမှုရှိပြီး ရောမခေတ်က ပိုးတီများအား စားသောက်ဖွယ်တစ်ရပ်အဖြစ် ယူဆမှုရှိခဲ့သော်လည်း အင်းဆက် စားသုံးမှုသည် ဥရောပတွင် ပုံမှန်စားသောက်မှုအလေ့အထမဟုတ်ခဲ့ကြောင်း၊ အင်းဆက်အခြေပြု စားသောက်ကုန်များသည် ပြောင်းလဲလာသည့် စားသောက်မှုပုံစံတစ်ရပ်အဖြစ်သာမက လာမည့် ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင်ရှိလာမည့် ကမ္ဘာ့လူဉီးရေ(၉)ဘီလီယံဝန်းကျင်၏ စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက် အတွက် အထောက်အကူပြုမှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ အင်းဆက်များတွင် ပရိုတင်းပါဝင်မှုသည် (၃၅%)မှ (၇၇%)အကြားရှိသဖြင့် အသားများတွင်ပါဝင်သည့် ပရိုတင်းဓါတ်ထက် ပါဝင်မှု ထက် ပိုမိုကြောင်း၊ အင်းဆက်များ၏ အာဟာရဆိုင်ရာကောင်းမွန်သည့်အချက်များ ရှိသော်လည်း လက်ရှိတွင် နယ်ပယ်အလိုက် အထူးပြုထုတ်ကုန်ဈေးကွက်အဖြစ်သာ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ အီးယူတွင် နှစ်စဉ် အင်းဆက် ပရိုတင်းတန်ချိန်(၆၀၀၀)ခန့်သာ ထုတ်လုပ်နိုင်သေးကြောင်းနှင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် တန်ချိန်(၂)သန်းမှ(၅)သန်းကြားထုတ်လုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
Read more about ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အာရှဒေသ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းများ